ဆောငျးမှာကွှသေောနှေ – My Blog
သညျတနှေ လပှေနေဲ့အတူ စိတျရူးတှလေညျး လှငျ့မြောဆဲ။ သညျတမိုး မိုးစကျနဲ့အတူ လြှပျလကျလို့ ခြိနျးလိုကျတိုငျး အတိတျဟောငျးကိုပဲ လှမျးမိတယျ။ သညျတဆောငျး ရာသီတှေ ဘယျလိုပွောငျးပွောငျး လယျစောငျ့တဲနားက သကျမခသြံနဲ့ အဝေးကို ငေးနဆေဲပါ မိနှရေေ….။ သွျော… မိနှေ မိနှေ ဟူးးး အတိတျဆီသို့ ဖိုးထောငျစိတျတှေ လှငျ့မြောနမေိတာက တိုကျဆိုငျမှုမြားစှာဖွငျ့ ကွုံဆုံရတဲ့ နရေ့ကျမြားမှာပေါ့။ ပူပွငျးလှတဲ့ နှနေံကျခငျးတခုမှာ “သားဖိုးထောငျရေ အိပျယာထလေ မိနှတေို့ ထငျးကောကျထှကျဖို့ စောငျ့နကွေပီ” “ရတယျ ဒျေါလေး အဲဒီအိပျပုတျကို မိနှေ သှားနှိုးလိုကျမယျ” ပွောရငျး ဖိုးထောငျအိပျနတေဲ့ အိမျနောကျဖေးအဖီတဲအတှငျး မိနှေ ဝငျသှားခြိနျမှာ မွငျလိုကျရတဲ့ မွငျကှငျးက ပါးစပျအဟောငျးသားနဲ့ ရငျဖိုထိတျလနျ့စရာလေ။
နဖေ့ကျမှာ ပငျပငျပနျးပနျးလှုပျရှားရုနျးကနျရပွီး အိပျရေးဆိုးတဲ့ဖိုးထောငျအိပျနပေုံက ပူလှနျးတော့ ပုဆိုးက ခါးအထိလနျနပေီး သူ့ရဲ့ကွီးမားလှတဲ့လီးကွီးက မိုးထောငျလို့နတောကို မိနှမွေငျလိုကျရတော့ “အို တကယျအကွီးကွီးပဲ သူ့အကို ကိုဇျောပွောတာ ဟုတျသားပဲ” လို့ စိတျမှာတှေးရငျး စောကျဖုတျက ကငျြကနဲ တခကျြရှုံ့သှားပီး ရငျဖိုလှိုကျမောရငျး အဖီတဲအပွငျဖကျ အသာလေးပွနျထှကျကာ ထရံကို တဖုနျးဖုနျးပုတျပီး”ဖိုးထောငျ ဖိုးထောငျ ထတော့ဟဲ့ ထငျးကောကျသှားရမယျ နောကျကနြပေီ ” အသံနညျးနညျးမွှငျ့နှိုးလိုကျမှ ဖိုးထောငျလညျး လနျ့နိုးလာပီး “ဟငျ ထပီ ထပီ မိနှေ” ဟု ကပြာကယာ အိပျယာထလိုကျမှ မိမိဖွဈပကျြနတောကို မိနှမွေငျသှားပီလား တှေးရငျး မကျြနှာသဈပီး အမထေညျ့ပေးလိုကျတဲ့ ထမငျးထုတျလေးဆှဲရငျး မိနှတေို့နဲ့အတူ တောထဲ ထငျးကောကျထှကျခဲ့ကွတယျ။
ကိုယျစီကိုယျစီ ထငျးခွောကျအတူကောကျပီး နလေညျးအတျောလေးမွငျ့လာတော့ ” ဖိုးထောငျရေ၊ မိနှရေ၊ ထမငျးကွမျးစား ခဏနားရအောငျဟေ့” အေးမူရဲ့ ဆျောသွမှုကွောငျ့ ခဏအမောဖွရေငျး မနကျစာ ထမငျးကွမျးကွျော ဝိုငျးဖှဲ့စားပီး အေးမူအလဈမှာ “မိနှေ ဒီည ကိုဇျောက တှခေ့ငျြလို့တဲ့” တိုးတိုးလေး ပွောလိုကျတော့၊ “ရှူး အိမျကအခွအေနကေောငျးရငျ အေးမူအိမျ အလညျသှားမလို့ဆိုပီး ထှကျခဲ့မယျလို့ နငျ့အကိုကို ပွောထားလိုကျ” “အေးပါဟာ နငျတို့ကလညျး ယူမှာဖွငျ့လညျး ခိုးပွေးကွဟာ ဘာတှမှေနျး မသိဘူး” “ကွားက အောငျသှယျနရေတဲ့ငါ့ကို နငျ့အဖကွေီက ရိပျမိလား မသိဘူး။ တှလေို့ကျတိုငျး ဘုကွညျ့ ကွညျ့နတေယျ” “ဟယျ ဟုတျပါဘူး ဖိုးထောငျရယျ အဖကေ အဲလိုကွညျ့နကွေပဲဟာ” “အငျးပါ နငျတို့ကို မိဘတှေ သဘောမတူတဲ့ကွားက ခြိနျးပေးရတဲ့ ငါက ခေါငျးကြိနျးနပေီ” “သူမြားအခဈြရေး ကူညီကောငျးပါတယျ ဖိုးထောငျရယျ” “နငျ့အတှကျလညျး အေးမူကို ငါပွောထားတယျ သိလား” ပွောရငျး ဖိုးထောငျပေါငျကို မိနှပှေတျရငျး ခြော့လိုကျတော့ “အငျး အေးမူကို ငါယူဖို့အထိ စိတျကူးထားတာ””ဖှဂျ့မပွောရဲသေးလို့၊ ပီးတော့ တို့က ငယျသေးတယျလေ”
“အမယျ ဘာငယျတာလဲ? လူကဖွငျ့ အခုမှ ၁၆နှဈတဲ့၊ အေးမူသာ နငျနဲ့ ရညျးစားဖွဈလို့ကတော့ မွငျယောငျသေး။ အဟိ” “ဟငျ! ဘာအဟိလဲ မိနှေ” “မနကျစောက ငါအိပျနတော နငျမွငျသှားတာလား” “မွငျစရာလားဟဲ့ နငျ့အကိုပွောလို့ သိထားတာ ကွာပေါ့” ဖိုးထောငျကို လိမျညာပွောလိုကျရပမေဲ့ မိနှစေိတျထဲ ပွနျမွငျယောငျပီး ကကျြသညျးမြား ထလာရငျး ကငျြကနဲ ရငျဖိုမိပွနျတယျ။ “ဟာ မဟုတျကဟုတျကတှေ ဘယျသူ့မှလြှောကျမေ၊ပွာနဲ့နျော မိနှေ” “တျောကွာ ရှာထဲမှာ ငါ့ကွိုကျမဲ့သူ မရှိပဲနအေုံးမယျ” “အေးပါဟဲ့ ပွောစရာလား ဟိဟိ” မိနှေ လြှာလေးထုတျရငျး ဖိုးထောငျပေါငျကိုပုတျးရငျး ပွနျပွောလိုကျခြိနျမှာ “ဟဲ့ ဖိုးထောငျနဲ့မိနှေ တိုးတိုးလေး တှတျထိုးမနကွေနဲ့ ရှာပွနျနောကျကလြိမျ့မယျ။ ထငျးပွနျကောကျကွစို့” “နငျတို့နှဈယောကျက ကွိုကျနကေပြီလား?” “အမလေးတျော သူကွိုကျနတော ငါ့မဟုတျဘူးဟေ့။ နငျ့ကို နငျ့ကို” အေးမူရငျပတျကို မိနှလေကျထောကျရငျး ပွနျပွောလိုကျတော့ “အိုတျော မိနှကေလဲ ဘာမှနျးမသိ ဟိုကဖွငျ့ တုတျတုတျတောငျလှုပျတာ မဟုတျဘူး” ရှကျစနိုး မကျြနှာပေးဖွငျ့ အေးမူက ပွနျပွောပီး ထငျးကောကျရနျ အဝေးသို့ပွေးသှားသော အေးမူနောကျကြောကို ငေးကွညျ့နရေငျး အေးမူရဲ့ဖငျသားလုံးကဈြကဈြလေးတှေ လှုပျခတျသှားတာကို မွငျမိလိုကျတော့”ဒီညအတှကျလညျး မှနျးထုလိုကျအုံးမယျ အေးမူရေ” လို့ စိတျကူးရငျး ပွုံးရှငျစှာဖွငျ့ ထငျးကောကျရနျ လူစုခှဲလိုကျကွပမေဲ့ ပုဆိုးထဲက လီးကွီးက ဆတျကနဲ တခကျြတငျးတကျလာကို အနားမှာရှိတဲ့ မိနှကေ အမှတျတမဲ့ မွငျမိလိုကျပွနျတယျ။
“ဖိုးထောငျတော့ အတျောထနျမှာပဲ”လို့ တှေးလိုကျရငျး မသိသလိုပဲ နလေိုကျပီး ထငျးခွောကျမြားသာ ဆကျ၍ကောကျလို့ နလေိုကျတယျ။ ထငျးခွောကျမြား ကောကျယူပီး ရှာရောကျလို့ မှောငျရီပြိုးစမှာပဲ “ဒျေါကွီး ညီလေးဖိုးထောငျရှိလား” “အေး ရှိသကှဲ့. နောကျဖေးအဖီထဲ လှဲနတေယျထငျပါရဲ့” “ဟုတျ ဒျေါကွီး ကြုပျပဲသှားလိုကျမယျ”လို့ ပွနျပွောရငျး ကိုဇျောတယောကျ ဖိုးထောငျရှိရာ အဖီထဲလေးထဲဝငျရငျး “ညီလေး မိနှကေ ဘာပွောလိုကျလဲ လာမယျတဲ့လား?” အသံခပျအုပျအုပျလေး မေးလိုကျရာ “အိမျက အခွအေနကေောငျးရငျတော့ ထှကျလာမယျတဲ့” “ညီလေးပဲ အေးမူတို့အိမျမှာ လသာသာ စကားထှာဖှကျမယျဆိုပီး သှားချေါပေးပါလား။ ကူညီပါ ညီလေးရာ ။ ငါ မငျးကို စာအုပျပေးဖတျမယျ” စာအုပျဆိုတဲ့အသံကွားလိုကျတော့ ဖိုးထောငျလညျး တကျကွှလာပီး “ဟုတျ ကိုကွီး ညီလေးစာအုပျဖတျတာ ဘယျသူမှ မသိစနေဲ့အုံးနျော”ဟု ပွောရငျး ခွလှေမျးတို့က မိနှအေိမျကို ထှကျခှာခဲ့ပီလေ။
” မိနှရေေ မိနှေ မိနှရှေိလား အဒျေါ” “ငါ ဒီမှာ ဖိုးထောငျ ဘာကိစ်စရှိလို့လဲ” မှငျသသေနေဲ့ ပွနျမေးတော့ “အေးမူတို့မှာ လသာသာနဲ့ စကားထှာဖှကျတိုငျး ကစားမလို့၊ နငျလိုကျမလားလို့ ငါလာချေါတာ”လို့. အသာလေးမကျြစိမှတျပွတော့ မိနှလေညျး “အမေ သမီးလိုကျသှားအုံးမယျနျော”ပွောလိုကျရာ “အေး ညမနကျစကွေနဲ့နျော ။ အပွနျလညျး လိုကျပို့ပေးလိုကျနျော ၊ဖိုးထောငျ” “ဟုတျ ဂြီးတျော သှားပီနျော”ဟု ပွောပီး ဖိုးထောငျနဲ့အတူ မိနှလေညျး အတူတူလိုကျလာရငျး အမွဲခိုးပီး ခြိနျးတှနေ့ကွေ ဖိုးထောငျရဲ့အဖီထဲဆီသို့ တိတျတိတျကလေး ဘယျသူမှမရိပျမိအောငျ သှားနရေငျး “ဟဲ့ဖိုထောငျ ဖွညျးဖွညျးသှားပါဟဲ့ ။ အမှောငျရိပျကလညျး ခိုသှားအုံး သူမြားတှမွေငျသှားမှာလညျး ငါရှကျတယျ”ပွောရငျး ဖိုးထောငျအနားကပျပီး လမျးအတူတူလြှောကျလိုကျရာ ဖိုးထောငျရဲ့တထောငျက မိနှနေို့အုံတငျးတငျးလေးကို ထောကျမိပီး ဖိုးထောငျစိတျတှေ ဖငျြးကနဲ ကွှတကျလာပီး နလေ့ညျက အေးမူရဲ့ဖငျလုံးလုံးလေးကို ပွေးမွငျလိုကျတာ လူပြိုရိုငျးရဲ့လီးကွီးက ပုဆိုးကွားမှာ တငျးကနဲဖွဈလာတယျ။
အိမျခွံရှရေ့ောကျတော့ အမအေ့ရိပျအခွအေနေ မတှတေ့ော့ မိနှကေို ကိုဇျောစောငျ့နတေဲ့ အဖီထဲလေးထဲ ပို့ပေးရငျး “ကိုကွီး မိနှရေောကျပီ ကနြော့ပေးစရာရှိတာ ပေး ။ တိုးတိုးတိတျတိတျလညျး ပွောကွအုံး ။ အိမျအပျေါထပျမှာ အမအေိပျနပေီထငျတယျ” အသံခပျအုပျအုပျပွောပီး ကိုဇျောရဲ့သူငယျခငျြး မွို့ပျေါက ငှါးလာတဲ့ အပွာရောငျမကျြနှာဖုံးစာအုပျသေးသေးလေးကို လှမျးယူရငျး “အေးမူတို့အိမျဖကျ ခဏသှားပီ” လိမျညာပွောဆိုကာ ခွဖှေဖှနငျးပီး တဲအတှငျးက အကိုကွီးကိုဇျောနဲ့မိနှတေို့ရဲ့ ခဈြကွညျနူးနပေုံကို သူတို့မမွငျအောငျ ခိုးးခွောငျးကွညျ့ဖို့ အိမျအောကျကို တှားသှားပီး ငွိမျနလေိုကျတယျလေ။ “လှမျးလိုကျတာ မိနှရေယျ ရှူး” “အို အကိုကလညျး တှတေ့ာနဲ့ မိနှကေို အတငျးဖကျ တအားနမျးတော့တာပဲ ။ ဒီမှာ အသကျရှူကွပျပီး အနရေခကျတယျရှငျ့” “ခဈြလို့ပါ မိနှရေယျ ပွှတျ ပွှတျ” ကိုဇျောလညျး မိနှနှေုတျခမျးကို စုပျရငျး နို့အုံလေးကို အကငြ်္ီပျေါက အုပျကိုငျပှတျခရြေငျး “နှလေေး အကငြ်္ီခြှတျမယျနျော ။ နို့လေးတှေ ကိုကို တဒာားစို့ခငျြပီ””
“အာ ကိုကိုရယျ မသိဘူးဟာ မိနှေ အနရေခကျတယျ ။ ဟိုဟာတော့ မလုပျရဘူးနျော ။ မင်ျဂလာဦးညမှ ကိုဇျောကို ခှငျ့ပွုမယျ” ခဈြသူနှဈဦးရဲ့ တီးတိုးခဈြရညျလူးနသေံကို မမွငျရပမေဲ့ ကွားနရေတဲ့ ဖိုးထောငျမှာတော့ ပုဆိုးထဲကလီးကွီးကို ဆုပျကိုငျရငျး အေးမူရဲ့ဖငျလှလှလေးကို မှနျးကာ ဖှဖှလေး ထုနလေိုကျရငျး
“အမလေး ကိုကို မိနှေ အနရေအရမျးခကျတယျ ။ ဖွညျးဖွညျးစို့ပါနျော အ အ ရှီးးး လကျက ဘယျလိုလုပျနတောလဲ ကိုကိုရယျ မိနှဟောအထဲမှာ သေးပေါကျခငျြသလို ခံစားရတယျ အိ အ ရှီးး” ကိုဇျောလညျး ခဈြသူမိနှရေဲ့နို့တှစေို့ရငျး စောကျစိကို လကျမနဲ့ပှတျကလိရငျး စောကျခေါငျးအတှငျးက လကျညိုးလေးကို
ခပျသှကျသှကျလေး ကစားပေးလိုကျရာ မိနှလေကျတှကေ ကိုဇျောလညျပငျးကို တအားဖကျတှယျရငျး ခါးကွီးကော့တကျလို့ ခွဖြေားတှေ ကှေးသှားရငျး ဖငျဆုံကွီးတဆတျဆတျတုနျကာ “အီးကနဲ”ညညျးညူ၍ ပီးမွောကျသှားပီလေ။
“နှလေေး ကောငျးလား “ “အငျး ကိုကို လူကို နှုံးသှားတာပဲ” “အဲဒါထကျကောငျးတာ နှလေေး ခံစားဖို့ ဒီနှဈဆောငျးရောကျလို့ လယျတှသေိမျးပီးရငျ လကျထပျကွရအောငျနျော။ လောလောဆယျ ကိုဇေျာ့ကို ကွငျနာပေးအုံးနျော” ပွောရငျး ပုဆိုးခြှတျထားတဲ့ လီးပျေါကို မိနှလေကျကလေး တငျပေးလိုကျရာ
“ဟိ ကိုကို့ဟာလညျး အတျောတငျးနပေီနျော”ပွနျပွောရငျး ဖှဖှလေး ထုပေးနစေဉျ မနကျစောကမွငျခဲ့ရတဲ့ ဖိုးထောငျလီးကွီးကို စိတျထဲ မွငျယောငျလာပီး ကိုဇျောလီးထကျ ပိုကွီးပိုတုတျတာ တှေးရငျး ကိုဇျောလီးကို တအားဖဈြလို့ ခပျသှကျသှကျလေး ထုပေးနမေိစဉျ “ဒား”ဟူသော အသံနဲ့အတူ ဗွဈကနဲ သုတျရညျတှေ ပနျးထှကျရငျး “ကောငျးလိုကျတာ နှလေေးရယျ ။ ဒီညလုပျပေးတာက အရငျကထကျ ပိုကောငျးသလို ခံစားမိတယျ မိနှရေယျ” မိနှပေါးလေးကို အနမျးခွှရေငျး ကိုဇျောအသံကွားရငျး အပွငျက ခိုးပီးနားထောငျနတေဲ့ ဖိုးထောငျလညျး သုတျရညျတှကေို မွပေျေါသို့ ပနျးထုတျရငျး အေးမူကို အမွနျခဈြခှငျ့ပနျဖို့ ဆုံးခကျြခလြိုကျပီလေ။
ဖိုးထောငျတယောကျ အကိုဝမျးကှဲ ကိုဇျောတို့စုံတှဲ ခဈြရညျလူးတဲ့ အသံတှရေယျ မကျြနှာဖုံးအပွာထဲက ကာမဆကျဆံနညျးတှေ ဖတျရငျး ဂှငျးထုလိုကျ လလေ့ာမှတျသားလိုကျဖွငျ့ တကယျ့လကျတှေ့ ကာမဆကျဆံကွညျ့လိုစိတျတှေ ထကွှလာပီး ရငျထဲကကြိတျပီး ခဈြနရေတဲ့ အေးမူကို ဖှငျ့ပွောဖို့ မိနှလေညျး ပွောခိုငျးပီး သူကိုယျတိုငျလညျး ခဈြကွိုကျနကွေောငျး ဖှငျ့ဟလို့ ခဈြခှငျ့ပနျလိုကျရာ မခူးခငျက ညှတျခငျြနတေဲ့ အေးမူလညျး ဖိုးထောငျအခဈြကို
လကျခံပွီး အသိအမှတျပွုလိုကျရာ ကိုဇျောနဲ့မိနှလေို လူခွတေိတျတဲ့ ညနကျတှမှော အေးမူတို့အိမျနောကျဖေးက မနျကြီးပငျရိပျနဲ့ နှားစာတဲအတှငျး အခါအခှငျ့သငျ့သလို ခဏခဏခြိနျးတှပေ့ါမြားပီး ဖိုးထောငျရဲ့ လလေ့ာစမျးသပျတဲ့ အပှတျအသပျ အကွငျနာတှအေကွားမှာ အရိုငျးစပယျ
အေးမူတယောကျ သာယာနဈမှနျးလို့ ခဈြတဲ့သူဖိုးထောငျအား ဘဝကိုပုံအပျလိုကျရငျး သောကျလသေမြှ အငတျမပွတေဲ့ ဆာငနျရကေို နှားစာတဲထဲမှာလညျး ခဈြရညျလူး ယာတောအတူသှားရငျး လယျစောငျ့ထဲမှာ လူလဈတိုငျး ခဈြခွငျးပွိုငျကွရာဝယျ သူတို့နဲအမွဲလိုလို အတုသှားအတူလာမြားတဲ့ မိနှလေညျး
တဖွညျးဖွညျးနဲ့ သူတို့ဆကျဆံတာကို ရိပျမိလာတယျ။
မိနှလေညျး ကိုဇျောနဲ့ အခှငျ့သာသလို ခြိနျးတှနေ့ပေမေဲ့ သူ့ရဲ့အပြိုစငျဘဝကို မင်ျဂလာဦးညမှ ပုံအပျဖို့ အားတငျးထားလညျး မွငျဖူးထားတဲ့ဖိုးထောငျလီးကွီးကို ပွနျတှေးတိုငျး စိတျထဲမှာ အမညျဖျောမရတဲ့ခံစားမှုတခု ဖွဈဖွဈလာပီး စောကျဖုတျကလညျး ကငျြခနဲဖွဈတတျနတော ကွာခဲ့ပီ။ ကိုဇျောနဲ့ခြိနျးတှဖေို့ ကွို/ပို့လုပျရာ ညတှမှောလညျး မိနှကေ ဖိုးထောငျဒာား ပှတျသီးပှတျသပျတှေ လုပျမိနတေတျတယျ။ ဖိုးထောငျလညျး အကို့ခဈြသူ ငယျသူငယျခငျြးမို့ မဖွဈသငျ့မှနျး
သိပမေဲ့လညျး တခါတလေ မိနှခေါးလေး ပွနျဖကျမိရငျလညျး ငွိမျနတေတျတဲ့ မိနှကေို သှေးတိုးစမျးခငျြလာခဲ့တယျ။ “မိနှေ နငျတို့လညျး ယူကွတော့လေ ။ ငါနဲ့အေးမူတော့ နောကျထပျ ၂ နှဈ ၃နှဈဆို လကျထပျဖို့ စိတျကူးထားတယျ” “သိပါတယျ ဖိုးထောငျရယျ အေးမူ နငျ့အပျေါ ဘယျလောကျထိခဈြ ဘယျလိုထိ တနျးတနျးစှဲနတော အေးမူပွောထားလို့ အကုနျသိ၊ ဟိ ဟိ” “အာ အေးမူတော့ လုပျခလြိုကျပီ ။ တှမှေ့ နာပီသာမှတျ” “ဟိ ဟိ အေးမူကလညျး အဲဒီနာတာလေးကို သဘောကတြာတဲ့” “ဟာ ပွောမိမှ ပိုဆိုးနပေီ နငျလညျး အကိုကွီးကို နာအောငျလုပျခိုငျးပေါ့” “နငျ့အကိုကွီးက ငါ့ကို တနျဖိုးထား သစ်စာရှိတယျ သိလား ။ နငျတို့လို ယှပိုးထမနဘေူး ဟှနျး” “အေးပါဟာ ငါ ရိပျမိပါတယျ ။ ငါသာအကိုကွီးနရောဆို နနေိုငျပါဘူး။ ဟီးး” ” မသာ ကောငျစုပျ နငျ့အကိုကွီး တိုငျလိုကျမှာနျော “ “ဟာ အကိုကွီးတော့ မတိုငျပါနဲ့နျော။ ငါက သူ့ငယျခငျြးမလို့ စတာပါ၊ တျောကွာ ကိုဇေျာ့လကျသီးစာ ငါ မိနပေါ့မယျ” “မသိဘူး တိုငျမှာပဲ”ဟု ပွနျပွောခဲ့ပမေဲ့ တကယျတမျးကြ မိနှေ ပွနျမပွောခဲ့ပါ။
မိုးနှောငျးလို့ ကောကျလှိုငျးတှေ သိမျးနတေဲ့တရကျမှာတော့ ဖိုးထောငျ၊အေးမူနဲ့မိနှတေို့ အတူတူတလငျးသိမျးလို့ နလေ့ညျစာစားပွီးခြိနျမှာ အေးမူက ဖိုး ထောငျကို အသာလကျတို့ပီး “ဖိုးထောငျ အိမျကအမမှောလိုကျလို့ ကိုဇျောတို့လယျကနျသငျးဘောငျက ကနျစှနျးရှကျ သှားခူးမလို့ ။ နငျ ငါ့ကို ကူခူးပေးဖို့ လိုကျခဲ့အုံး” “အငျး သှားကွမယျလေ။ ငါလညျး နှားတှေ စားကကျြပွောငျးရမှာနဲ့ အတျောပဲ” ခဈြသူနှဈဦး ဘာကွောငျ့ အတူတူထှကျသှားတာ မိနှေ ရိပျမိတယျလေ၊ သူတို့ထှကျသှားပီး ဆယျမိနဈကြျောလောကျမှာ ကိုဇျောတို့ လယျစောငျ့တဲအနား ခွသေံဖော့ဖော့လေး နငျးလြှောကျပီး တဲအတှငျးကို
ခွောငျးကွညျ့လိုကျစဉျမှာ တှေးတငျထားသညျ့အတိုငျးပဲ ကှပျပဈြပျေါပကျလကျလှနျနတေဲ့ အေးမူရဲ့ပေါငျနှဈခြောငျးကို ဖိုးထောငျက ထမျးထားပီး အကငြ်္ီလနျနတေဲ့ အေးမူရဲ့ နို့တှစေို့ရငျး ဝါးကွမျးခငျးလေး တကြှိကြှိမွညျနအေောငျ ဆောငျ့လိုးနလေိုကျတာ မိနှေ မွငျရလိုကျတော့ စောကျဖုတျအတှငျးသားတှကေ ယားသလိုလို ခံစားမိလာတယျ။ ဖိုးထောငျလီးကွီး ဝငျထှကျလိုကျတိုငျး အေးမူစောကျဖုတျက တစှပျစှပျအသံလေးတှကေ မိနှအေတှကျ ရဆောသလို လှိုကျမောလာပီး လကျကအလိုလို စောကျဖုတျကို လုံခညျြပျေါက အုပျကိုငျရငျး ပှတျမိလာတယျ။ “အမလေးးး ကိုရယျ ဖွညျးဖွညျးလေး ဆောငျ့ပေးပါအုံး အား ရှီးး” ခေါငျးလေးတခါခါနဲ့ ညညျးနတေဲ့ အေးမူရဲ့အသံက ဖိုးထောငျအတှကျ စိတျပိုကွှလို့ လိုးခကျြတှကေ တဖွနျးဖွနျးမွညျအောငျ ပိုသှကျလာပီး “အ. အမေ့ ကို့ အမလေးး အမလေး ” အသံတှကေ မိနှအေဖို့ ဒူးတှညှေတျခှပေီး နို့အုံတှပေါ တငျးလာပီး ရငျတှတေုနျလာခဲ့ပီလေ။ “ကောငျးလိုကျတာ မူရယျ ရှူးး ။ကို့ကို လေးဖကျကုနျးပေးအုံး” တဲအတှငျးက ကာမဘုံမှာ စိတျနဈနတေော့ အပွငျကခိုးကွညျ့နတေဲ့ မိနှကေို မသိရှာပမေဲ့ မိနှတေယောကျတော့ အေးမူစောကျဖုတျထဲ ဝငျထှကျနတေဲ့ ဖိုးထောငျလီးကွီးရဲ့ ဆောငျ့ခကျြတှမွေငျရတိုငျး စောကျဖုတျအဝက ရှုံ့သှားပီး အရညျတှစေိမျ့ကနြပေီ။
လေးဘကျကုနျးထားတဲ့ အေးမူခါးကို ဖိကိုငျပီး နောကျကိုပွူးထှကျနတေဲ့ စောကျဖုတျထဲကို လီးကွီးဆောငျ့သှငျးတိုငျး စောကျဖုတျနခမျးသားတှေ ခြိုငျ့ဝငျသှားပီး လီးကွီးအထုတျမှာ လီးနဲ့ကပျပါလာတာတှကေ မိနှရေဲ့စိတျကို ညို့ယူနတေယျလေ။ တခကျြတခကျြ ဘူကနဲ လပွေနျသံတှေ ထှကျလာပမေဲ့ တဟငျး ဟငျး ညညျးပီး အလိုးခံနတေဲ့ အေးမူကိုလညျး အံ့သွနမေိတယျ။ ” အ အမလေး ကို အေး အေးမူ ပီးခငျြပီ ဆောငျ့ ဆောငျ့” “အားး အ ကိုလညျး ပီးး ပီးး” အေးမူဖငျသားတှနေဲ့ ဖိုးထောငျဆီးစပျတို့ တဖွနျးဖွနျး ရိုကျသံနဲ့အတူ ဖိုးထောငျလညျး တှနျ့ကနဲ တှနျ့ကနဲ တုနျသှားပီး ကှပျပဈြပျေါမှောကျရကျလဲသှားတဲ့ အေးမူရဲ့ကြောပျေါကို ရှူးကနဲ နှာမှုတျသံနဲ့ ထပျရကျဖွဈသှားတဲ့ သူတို့နှဈဦးကို ကွညျ့ရငျး မိနှလေညျး လယျစောငျ့တဲထရံကို ယောငျရမျးကိုငျမိသညျအထိ
ညှတျခှကေသြှားခဲ့ပီ။ “ခြှတျ”ကနဲ အသံသဲ့သဲ့ကို မှိနျးနရေငျးနဲ့ ဖိုးထောငျကွားမိလိုကျပမေဲ့ ထမကွညျ့တော့ပဲ မိနှဖွေဈမှာ သိနတေော့ “အေးမူ ကိုလိုးပေးတာ ကောငျးလား? ကိုတော့ လိုးကောငျးလှနျ့လို့ အေးမူကို လကျထပျခငျြလှပီ” “အငျး ကို ကောငျးလညျးကောငျး နာလညျနာတယျ။ ကို တအားဆောငျ့
လိုကျတိုငျး ကို့ဟာကွီးက အေးမူရဲ့ဟှာထဲ ပွညျ့ကွပျပီး သားအိမျအထိ အောငျ့ကနဲ ကငျြခနဲ့ဖွဈပီး အေးမူတကိုယျလုံး နတျပူးသလို အကွောစုံ
တုနျခါသှားတယျ။ အေးမူလညျး ကိုနဲ့အတူတူ နခေငျြပီ၊ ကိုကြှေးနတေဲ့ ဆေးကဒျလညျး မစားခငျြတော့ဘူး ကို” “နောကျနှဈ ဝါမဝငျခငျ နားဖောကျပီး
အခုလိုလေး အေးမူရဲ့ဖုတျထဲ တရားဝငျ အကွာကွီး စိမျထားလိုကျခငျြပီ” “ဟှနျ့ ကိုပို ဖယျတော့၊ ဟိုမှာ မိနှကေ ကွာနလေို့ လိုကျလာမှ မွငျလို့မကောငျး ဖွဈနအေုံးမယျ” မိနှေ အကုနျလုံး မွငျခဲ့ကွားခဲ့ပီး တလငျးပွငျကို ပွနျသှားတာ ခဈြတလငျးမှာ ခဈြခွငျးပွိုငျရငျး ကွညျနူးနတေဲ့ အေးမူ မသိရှာ။ မိနှရေငျထဲမှာတော့ သစ်စာရှငျကိုဇျောဆီ အတှေးရောကျလိုကျ ဖိုးထောငျနဲ့အေးမူတို့ရဲ့ ကာမဆကျဆံပုံတှေ ပျေါလာလိုကျနှငျ့ နီးစပျဖို့ ခကျခဲလှနျးတဲ့ ရှရေ့ေးကို အတှေးနယျခြဲ့ရငျး ထိုငျနစေဉျ “ဟဲ့ မိနှေ ဘာတှေ တှေးပီး ဘာတှေ ငေးနတောလဲ” အေးမူအသံကွားမှ အတှေးအာရုံတှေ သတိပွနျဝငျလာပီး “ဘာရယျ မဟုတျပါဘူး အေးမူရယျ ။ အိမျကလညျး ကိုဇေျာ့ကို နှမျးပါးခြို့တဲ့တော့ သဘောမကြ ။ ကိုဇျောကလညျး သတ်တိနညျးတာလား၊ တှဝေတောလား ဝခှေဲမရတော့ ငါတို့ရဲ့ရှဆေ့ကျရမဲ့ခရီးကို စဉျးစားနတောပါ အေးမူရယျ” “ကိုကွီးကိုဇျောလညျး မထုံတကျသေးနဲ့ ဘယျလိုကွီးမှနျး မသိဘူး ။ ငါ မေးတော့ အခု နှမေဝငျခငျ နငျ့ကို တောငျးရမျးမယျ ပွောတာပဲ ။ နငျ့မိဘတှကေ သဘောမတူရငျ ခိုးပွေးဖို့အတှကျ မွို့က အကိုကွီးရဲ့ သူငယျခငျြးကို မျောတျောကားစီစဉျခိုငျးထားတယျ ပွောတာပဲ” “နငျ့အိမျက သဘောမတူရငျ ခိုးရာနောကျသာ လိုကျတော့ မိနှေ ။ အေးမူတို့လညျး နောငျနှဈဝါကြှတျရငျ လကျထပျဖို့ တိုငျပငျထားပီ” “အေးပါဟယျ နငျတို့က အခုတောငျ လကျထပျနခေငျြကွပွီမလား ။ မသိ ခကျမယျနျော ကောငျမ ။ ပွော မပွောခငျြဘူး ဟှနျး” “ဟိ ဟိ နငျကလဲ တို့က တအားခဈြကွလို့နျော” မိနှအေား ရှကျစနိုးဖွငျ့ အေးမူက ရိုကျပုတျကြီစယျလိုကျရာ ဖိုးထောငျ မကွားအောငျ အေးမူအနားကပျပီး မိနှကေ “ဖိုးထောငျကို ခဈြတာလား? ဖိုးထောငျရဲ့ထောငျနတော ခဈြတာမလား?
ကောငျမ တအားယှနေ ။ သူငယျခငျြးခငျြး လာဖွီးမနနေဲ့ ဟှနျး” “ဟိ ခဈြလို့ ဘဝကိုပုံအပျထားတာပါနျော ။ သူ့ အပွုအစုကောငျးတော့ပိုပွီး ခဈြခငျစှဲလနျးနေ ရတာလေ ။ နငျလညျး ကိုဇေျာ့ကို ပွုစုကွငျနာခိုငျးဖို့ မွနျမွနျလကျထပျကွတော့” “ဟိတျ ဟိုနှဈယောကျ တိုးတိုးလေးနဲ့ ဘယျသူ့အတငျးပွောနကွေတာလဲ? နစေောငျးတော့မယျ အကုနျသိမျးဆညျးပွီး လှညျးပျေါတငျထားနှငျ့ ။ ငါ နှားတှေ သှားကောကျလိုကျအုံးမယျဟေ့” သုံးယောကျသား ကိုယျစီ လုပျဆောငျစရာမြားအပွီး ရှာသို့ပွနျခဲ့ကွပီလေ။ နောကျတနမေ့နကျမှာတော့ “မိနှရေေ မိနှေ” အိမျရှကေ့ အေးမူချေါသံကွောငျ့ “ဘာတုနျးဟဲ့ အေးမူ ။ စောစောစီးစီး” “ငါ ဒီနေ့ အမနေဲ့ ဟိုဖကျရှာ ခဏသှားစရာရှိလို့ဟဲ့ ။ အဲဒါကွောငျ့ နငျနဲ့ဖိုးထောငျ ယာတောထဲ သှားနှငျ့နျော ။ ညနပေိုငျးလောကျမှ လှညျးနဲ့ ငါလိုကျလာခဲ့မယျ။ အဲဒါ လာပွောတာ မိနှေ” “အေးပါဟယျ ဖိုးထောငျလညျး ငါပွောပီး သှားလိုကျကွမယျ စိတျခြ။ တလငျးသိမျး လကျစသတျဖို့ကလညျး နညျးနညျးပဲ ကနျြတော့တာပဲလေ။ ငါတို့နှဈယောကျနဲ့ ရပါတယျ အေးမူရယျ” “အငျးပါ ငါ သှားပီနျော မိနှေ” ပွနျထှကျသှားတဲ့ အေးမူကို ငေးကွညျ့ရငျး မနကေ့ အဖွဈအပကျြကို ပွနျလညျသတိရမိပွီး မိနှရေငျထဲမှာ လှိုကျဖိုမောရငျး သကျပွငျးလေး မြှငျးမြှငျးခမြိလိုကျတယျ ။
လယျတလငျးရောကျလို့ ဖိုးထောငျနဲ့မိနှလေညျး တလငျးကို လကျစသိမျး သိမျးဆညျးနရေငျး “မိနှရေေ အကိုကွီးတော့ နငျ့ကိုခိုးပွေးဖို့ မွို့က သူ့သူငယျခငျြးကို ကားစီစဉျခိုငျးထားတာ ဘယျလိုအခွအေနရှေိပီလဲဟ” “ဆောငျးမကုနျခငျ လယျလုပျခတှရေတာနဲ့ ခိုးမယျပွောတာပဲ ။ အခုတောငျ ပိုကျဆံပိုရအောငျ ပှဲစားကိုဘအောငျနဲ့ လုပျအားစိုကျပီး နောကျလိုကျအကူလုပျပါ အခြိနျရသလို လုပျပေးနတော အဆငျပွပေီး နညျးနညျးတော့ စုမိဆောငျးမိပွီတဲ့” “ဝမျးသာပါတယျဟာ မွနျမွနျယူကွတော့ မိနှေ ။ ငါ့အကိုကွီးလညျး အနအေေးလှနျးတော့ နငျကယျမှပဲ လူပြိုဘ၀ ကြှတျတော့မှာဟ” “ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ငါက ကိုဇေျာ့ကို လကျတှဲသှားမှာပါ ဖိုးထောကျရယျ” “ငါ့အကိုကွီး ကံကောငျးပါတယျ ။ ငါသာ အကိုကွီးနရောဆို အခုခြိနျထိ စောငျ့မနဘေူး” “ဟှနျးနျော ဖိုးထောငျ ။ ကိုဇေျာ့က နငျ့လိုမဟုတျဘူး။ မသိခကျမယျနျော၊ ဖိုးထောငျ” မိနှရေဲ့ မကျြစောငျးနဲ့အတူ အဓိပ်ပါယျပါသော စကားလုံးမြားက ဖိုးထောငျ ရှကျသှားပီး သှားကွီးဖွီးလို့ တဟီးဟီးရယျပွလိုကျရတယျ။ “ဟောတော့ အခြိနျခါမဟုတျ မိုးတှေ ညို့လာပီ ဖိုးထောငျရေ “ “ဟာ ဟုတျသားပဲ ။ မွနျမွနျအုပျဆိုငျးပီး အေးမူလာတဲ့အထိ စောငျ့ရမှာပဲ” “မိုးရှာရငျ ခိုဖို့ ကိုဇေျာ့တို့ လယျစောငျ့တဲပဲ နီးတယျနျော ။ ငါက မိုးရှာတာထကျ လြှပျစီးလကျ မိုးခွိမျးတာ ကွောကျတယျ ဖိုးထောငျ” “ငါရှိပါတယျဟ မိနှရေယျ ။ အခုတောငျ မိုးက ကလြာပီ ။ လာ လာ မိနှေ အကိုကွီးတို့တဲမှာ မိုးခိုပီး အေးမူကို စောငျ့ကရြအောငျ “ နှဈဦးသား အပွေးတပိုငျးဖွငျ့ ခပျသှကျသှကျ သှားရငျး တဲအတှငျးအရောကျမှာ မိုးက အငွိုးနဲ့ရှာသညျ့အလား သညျးသညျးထနျစှာ ရှာသှနျးလို့ ဝငျးကနဲ လြှပျစီးတခကျြ လကျလာပီး “ဂြိ နျး”ကနဲ မိုးခွိမျးသံက မိနှတေယောကျ “အမလေး” ယောငျရမျးအျောမိလိုကျပီး အနားမှာရှိတဲ့ ဖိုးထောငျလကျမောငျးကို ဆုပျကိုငျလိုကျတယျ။
“မကွောကျပါနဲ့ မိနှေ ။ ငါရှိပါတယျဟ ။ အခြိနျအခါမဟုတျ တလငျးဖကျြမိုးကလညျး တအားရှာလိုကျတာ” ညညျးတှားသံနဲ့အတူ မိနှအေား အားပေး စကားပွောနစေဉျ “ဂြိနျး ဂြိနျး ဒလိနျး” ဆကျတိုကျမိုးခွိမျးလိုကျရာ ဖိုးထောငျကို မိနှဖေကျထားမိအောငျ ကွောကျလနျ့ဖှယျ ခွိမျးလိုကျရာ မိမိအား ဖကျထားတဲ့မိနှခေါးကို ဖိုးထောငျလကျတှကေ ပွနျဖကျမိပွီလေ။ “တအားကွောကျနလေား မိနှေ ။ ငါ ဖကျထားမယျနျော ။” ခေါငျးလေးညိမျ့ပွရငျး အသားတှေ တုနျနတေဲ့ မိနှကေို ခပျတငျးတငျးလေး ဖကျထားလိုကျရာ အထိအတှတေို့က မနကေ့ပဲ ဒီတဲအတှငျးမှာ ဖွဈပကျြခဲ့တာကို နှဈဦးလုံးအတှကျ သတိရစရာ ဖွဈလာပီလေ ။ ” မိနှေ” တိုးတိုးလေးချေါလိုကျသံကွောငျ့ ခေါငျးလေးမော့ပီး ကွညျ့လာတဲ့ မိနှမေကျြဝနျးတှကေို ဖိုးထောငျ ရငျဆိုငျကွညျ့လိုကျရငျး လကျတှကေ မိနှတေငျပါးကို ပှတျနမေိရာ မိနှလေညျး ညိမျခံနမေိတယျ။ ဖိုးထောငျလကျတဖကျက မိနှမေေးစကေို့ ကိုငျသညျအထိ စိတျရိုငျးတှေ ဝငျလာပီး “မိနှေ”လို့ ထပျချေါလိုကျရာ “ဟငျ”ဆိုတဲ့ တခှနျးထဲသော အသံနဲ့ အရညျလဲ့နတေဲ့ မိနှမေကျြဝနျးတှကွေောငျ့ တလှုပျလှုပျလေး ဟနတေဲ့ နှုတျခမျးလေးကို ဖိုးထောငျ ပွှတျကနဲ တအားစုပျယူရငျး မိနှကေို ကှပျပဈြပျေါဖကျလှဲရငျး လကျတဖကျက အကငြ်္ီပျေါမှ နို့အုံကို အုပျကိုငျပှတျခနြေလေိုကျရာ “ဖိုး ဖိုးထောငျ မလုပျသငျ့ဘူးလဟော”လို့ ငွငျးဆနျပီး ရုနျးနပေမေဲ့ မိနှလေကျတှကေ အားမပါလှ ။
မိနှပွေောသမြှ ဘာမှမကွားသလို စိတျအမှောငျဖုံးနတေဲ့ ဖိုးထောငျက နှုတျခမျးစို့လိုကျ နို့တှကေို ပှတျခရြေငျး ပါးတှနေမျးရငျး အောကျကလီးကွီးက ခှဖကျထားတဲ့ မိနှပေေါငျသားတှကေို ထိုးကလိနသေလိုဖွဈနတော မိနှမေသိစိတျတို့က တအိအိ ညညျးလာရာ အတှအေ့ကွုံရှိထားတဲ့ ဖိုးထောငျလကျတှကေ မိနှအေကငြ်္ီကွယျသီးတှေ ဖွုတျထားပီး ဘရာစီယာကို ပငျ့တငျလို့ လုံးဝနျးနတေဲ့ နို့အုံကို အုပျကိုငျပီး နို့သီးရဲရဲလေးကို ပွှတျကနဲ ငုံစို့ပီး လြှာနဲ့ဝိုကျကလိလိုကျရာ “အမလေး ဖိုးထောငျ မလုပျပါနဲ့ ။ ငါ ငါတို့ အခုလို မဖွဈသငျ့ဘူးလေ” လို့ ပွောနပေမေဲ့ ဖိုးထောငျရဲ့ နို့သီးကို လြှာဝိုကျစို့လိုကျတိုငျး မိနှရေငျပတျက
ကော့ကော့ ပေးနမေိတယျ ။ ဖိုးထောငျလကျတဖကျက မိနှရေဲ့လုံခညျြစကို ဆှဲခြှတျပီး စထေ့ားတဲ့ ပေါငျကွားကို နို့စို့ရငျး ပှတျပေးလိုကျရာ ခပျဟဟဖွဈသှားတဲ့ မိနှပေေါငျကွားအတှငျး ဖိုးထောငျလကျက အမှေးမကွမျးသေးတဲ့ စောကျဖုတျကို အုပျကိုငျပီး ပွူထှကျလာတဲ့ စောကျစိကို ဖိပှတျပေးလိုကျရာ “အငျ့”ကနဲ ညညျးတှားပီး ပေါငျနှဈဖကျက ကားထှကျသှားပီး ဖငျကွီးက အလိုလိုကော့ပေးနပေီလေ။ စောကျစိကို လကျမနဲ့ပှတျကလိရငျး အရညျစိမျ့နတေဲ့ စောကျဖုတျနခမျးသားတှကေို အထကျအောကျပှတျကလိပေးလိုကျရာ မိနှလေကျတှကေ နို့စို့နတေဲ့ ဖိုးထောငျခေါငျးက ဆံပငျတှေ ဆုပျကိုငျနရေငျး တအိအိ အသံနဲ့ နှုတျခမျးကိုကျရငျး ခေါငျးကို ခါရမျးနအေောငျ ခံစားနပေီ။
အထှာနပျနတေဲ့ဖိုးထောငျလညျး နို့စို့နရေငျးက မိနှဗေိုကျသားပွငျကို စုပျနမျးရငျး ပေါငျနှဈဖကျကို ထောငျမပွီး မိနှစေောကျဖုတျကို လြှာနဲ့ အောကျကနေ ပငျ့ယကျပီး စောကျစိကို နှုတျခမျးနဲ့ညှပျရငျး အစိကို လြှာနဲ့ဝိုကျကလိပီး ပွှတျကနဲ စုပျလိုကျရာ”အမလေး ဖိုးထောငျ ရှီးး” ခေါငျးလေးမော့တကျသှားအောငျ ညညျးတှားရငျး ခွဖြေားတှေ ကုပျကှေးရငျး ဖငျကွီးကွှတကျလာကာ မိနှလေကျက ဖိုးထောငျဆံပငျကို တအားဆှဲယူလိုကျရာ “ဘယျလိုလုပျနတောလဲ ဖိုးထောငျ အ အိ” ဖိုးထောငျလညျး ကှပျပဈြအောကျမှ နှမေပေါငျနှဈဖကျကို ထမျးထားရငျး စောကျဖုတျနခမျးသားရဲရဲကို အသာဖွဲပွီး လြှာဖွငျ့ ဖုတျအဝကနေ စောကျစိအထိ ပငျ့ယကျလိုကျရငျး ပွူးထှကျနတေဲ့စောကျစိကို နှုတျခမျးနှငျ့ဖိညှပျကာ စောကျစိကို လြှာနှငျ့ ဝိုကျကလိပေးလိုကျရာ “အမလေး ဖိုးးထောငျ ရှီးး”ဆိုပီး ညညျးတှားရငျး တကွိမျတခါမှ မခံစားဖူးတဲ့ကာမ အရသာကွောငျ့ ခွဖြေားတှကှေေးပီး ပေါငျတှကေ အလိုကျသငျ့ပိုကားပေးလာပီး ဖငျကွီးကော့တကျအောငျ စောကျဖုတျအယကျခံနရေငျး မိနှလေကျတှကေ ဖိုးထောငျဆံပငျတှေ ဆုတျကိုငျကာ ဖိုးထောငျပငျ့ယကျလိုကျတိုငျး စောကျဖုတျကွီးကို
ကော့ကော့ပေးနမေိပီလေ။ မိနှခေေါငျးလေး ဘယျညာခါရမျးရငျး စောကျဖုတျအတှငျးသားတှကေို ယားယံလာပီး တခုခုကို တောငျ့တစိတျက “ဖိုးထောငျရယျ ဘယျလိုတှလေုပျနတောလဲ။ အမလေးး ရှီး ဟငျးး” မိနှအေဆငျသငျ့ဖွဈနပေီဆိုတာ အရညျတှရှေဲနတေဲ့စောကျဖုတျကွီးနဲ့ မိနှရေဲ့လိုလားတောငျ့တ ညညျးညူမှုတှေ အတှအေ့ကွုံရှိနတေဲ့ ဖိုးထောငျသိလိုကျတော့ မိနှပေေါငျတှေ ထမျးဖိထားရငျး လီးကွီးကို အရညျတှရှေဲနတေဲ့စောကျအကှဲကွောငျးပျေါ ဖိကပျကာ မိနှရေဲ့နို့တှကေို ဖိုးထောငျရငျဘတျနဲ့ ကပျထားရငျး မိနှပေခုံးနှဈဖကျကို အောကျမှလြိုဖကျပီး လီးထိပျဖွငျ့ စောကျစိကို ပငျ့ထိုးကလိပေးလိုကျရာ
“အဟငျ့ အ ” ညညျးတှားရငျး လီးထိပျကို စောကျဖုတျအဝနဲ့ တညျ့သှားအောငျ အောကျကနေ ဖငျကွီးကို ကော့ပေးမိနတေယျ ။
ညညျးတှားနတေဲ့ မိနှနှေုတျခမျးလေးကို ဖိုးထောငျ kissစုပျလိုကျရငျး စောကျရညျတှကေပျလာတဲ့ လီးကွီးကို စောကျဖုတျနခမျးသားပျေါ ပှတျဆှဲပငျ့ထိုး ကလိပေးနရေငျးမှ လီးထိပျက စောကျဖုတျအဝနဲ့ တညျ့သှားခြိနျမှာ ခါးအားနညျးနညျးသုံးကာ ဖိသှငျးလိုကျရာ “ဗွဈ” “အမေ့” ညှငျးသှဲ့သှဲ့ အျောလိုကျရငျး မိနှလေကျတှကေ ဖိုးထောငျကို တှနျးရငျး “နာတယျ ဖိုးထောငျ အု အု” စကားမပွောခှငျ့မရအောငျ နှုတျခမျးတှကေို ဖိုးထောငျkissဆှဲပီး မိနှနေို့တှကေို ရငျဘတျနဲ့ဖိပှတျအောငျ ဖကျထားရငျး စောကျဖုတျထဲဝငျသှားတဲ့ လီးထဈကို နညျးနညျးဖိသှငျးလိုကျ ခဏလေးငွိမျပီး စိမျထားကာ kissဆှဲလိုကျ လညျပငျးတှေ ယကျစုပျလိုကျ လီးကွီးကို နညျးနညျးဖိသှငျးလိုကျ လိုးပေးနစေဉျ လီးတဝကျခနျ့အရောကျမှာ မိနှရေဲ့အပြိုစငျတံခါးက တားဆီးနတော ဖိုးထောငျထိမိခံစားပီး တငျးကွပျစီးပိုငျနတေဲ့ မိနှေးစောကျဖုတျအတှငျး လီးကွီးကို ခဏစိမျပီး နို့တှစေို့ပေးလိုကျရာ မိနှတေယောကျ ကာမအရသာကို နာကဉျြမှုရောယှကျပမေဲ့လညျး ရငျဖိုလှိုကျမောစှာ ခံစားနမေိပီလေ။ ခဏစိမျထားတဲ့လီးကွီးကို စောကျဖုတျအတှငျးသားတှကေ ညှဈဆုပျလာခြိနျမှာ လီးကို နညျးနညျးလေးထုတျ ညငျညငျသာသာလေး ဖိသှငျးပီး လေး ငါးကွိမျလောကျ လိုးပီးခြိနျမှာ မိနှကေိုတအားဖကျထားရငျး kissဆှဲပွီး လီးထဈကို စောကျဖုတျအဝနားထိ ပွနျထုတျပီး ခါးအားသုံးကာ တခကျြထဲ ခပျဆပျဆပျ ဖိလိုးလိုကျရာ “ဖေါကျ” “အု အငျ့” မိနှရေဲ့ရုနျးကနျမှုနဲ့အတူ ဖိုးထောငျလီးကွီးလညျး မိနှစေောကျဖုတျအတှငျး တဆုံးဝငျသှားပီး မိနှလေကျသညျးတို့က ဖိုးထောငျကြောပွငျ အသားထဲထိ နဈဝငျသှားတယျလေ။ “နာလိုကျတာ ဖိုးထောငျရယျ”ပွောရငျး မကျြဝနျးအိမျမှ ဘာကွောငျ့ရယျမသိ မကျြရညျစတို့ စီးကလြာပမေဲ့ ဖိုးထောငျကတော့ စောကျဖုတျထဲ လီးကွီးစိမျထားရငျး နို့သီးတှေ ပှတျကလိုကျ နို့အုံကို ကိုငျထားရငျး လညျပငျးနဲ့နားရှကျကို စုပျနမျးကာ ကာမခလုပျတှကေို အဆငျ့ဆငျ့ဖှငျ့ပေးနပွေနျရာ စောကျဖုတျအတှငျးက ငွိမျနတေဲ့ ဖိုးထောငျလီးကို ညှဈဆုပျရငျး မိနှဖေငျကွီးက ကော့ကော့လာပီး တဟငျးဟငျး တအိအိ ညညျးသံပေးလာရာ ဖိုးထောငျလညျး လီးကွီးကို တဖွညျးဖွညျးခငျြး အသှငျးအထုတျ လိုးပေးနလေိုကျရာ လီးဝငျသှားတိုငျး စောကျဖုတျနခမျးသားတို့ ခြိုငျ့ဝငျပါသှားပီး လီးကွီးပွနျအထုတျမှာ စောကျဖုတျနခမျးသားတို့ လီးကွီးနဲ့ကပျပါလာပွီး လိုးဆောငျ့တိုငျး တစိစိ တစှပျစှပျနဲ့ အသံတှမွေညျလာကာ မိနှလေညျး လိုးသှငျးတဲ့အခြိနျမှာ စောကျဖုတျအတှငျးသားတှကေို လီးကွီးထိုးခှဲတဲ့အရသာနဲ့ လီးကွီးပွနျထုတျသှားတိုငျး ဟာတာတာဖွဈသှားပီး ကြှတျထှကျမှာ စိုးရိမျသညျ့အလား ဖငျကွီးကို အလိုလိုကော့ပေးနမေိတယျ။
စောကျရညျမြားရှဲနဈ၍ လီးအဝငျအထှကျ ကောငျးလာတော့ ဖိုးထောငျလညျး ဖွညျးဖွညျးမှ နညျးနညျးသှကျလာပီး လိုးဆောငျ့ရငျး “ကောငျးလိုကျတာ မိနှရေယျ ။ ငါ တအားလိုးကောငျးလိုကျတာ ရှူး” စကားလုံးကွမျးတှနေဲ့အတူ ဖိုးထောငျလိုးဆောငျ့ခကျြတှကေ “အိုး” “ဖတျ” “ဗွဈ” “စိ” အသံတှနေဲ့ ရောယှကျကွားယောငျနတေဲ့ မိနှကောမစိတျတှလေညျး တအားကွှတကျလာပီး “အိ အ အမလေး” ညညျးသံတှပေေးရငျး ဖငျကွီးကော့ကော့ပီး အလိုးခံနလေိုကျရာ
“အမလေး တမြိုးကွီးပဲ ဖိုးထောငျရယျ” “အား ရှူး မိနှေ တအားကောငျး မိနှေ သေးပေါကျခငျြသလိုဖွဈရာရငျ ပေါကျလိုကျနျော။ အားးး” ဖိုးထောငျရဲ့လိုးဆောငျ့ခကျြတှလေညျး ပိုသှကျလာရာ “အိ! အမလေးး အားး ရှီးးး” မိနှခေေါငျးလေး တခါခါနဲ့ ခွဖြေားတှကှေေးပီး ဖိုးထောငျကြောပွငျကို တအားဖကျတှယျရငျး ဖငျကွီး တဆတျဆတျကော့ကာ “ဟငျး ဟူး ” ညညျးတှားရငျး ငွိမျကသြှားရာ မိနှေ ပီးသှားပွီဆိုတာ သိလိုကျတဲ့ ဖိုးထောငျလညျး တအားလိုးဆောငျ့ရငျး မိနှရေဲ့စောကျဖုတျထဲကို လရညျမြား ဗွဈကနဲ ဗွဈကနဲ ပနျးထုတျရငျး “အားး ဟူးး ဖလူးး”သကျမောခသြံနဲ့အတူ မိနှကေို တငျးနအေောငျ ဖကျထားရငျး ကာမခရီးတို့ လမျးဆုံးခဲ့ပီလေ။
သုတျရညျနှေးနှေးတို့ ပကျဖနျြးမှုက မိနှစေောကျဖုတျအတှငျး အရသာတထူး ပေးစှမျးသလိုဖွဈသှားပီး၊ ဖိုးထောငျလီးကွီးကို စောကျဖုတျအတှငျးသားတို့က ညှဈယူပေးနမေိပွနျတယျ။ “ငါ့စိတျတှေ လှတျသှားတယျ မိနှေ။ အခုလိုမှားယှငျးအတှကျ နငျပေးမဲ့အပွဈလညျး ငါ ကနြေပျစှာ ခံယူမှာပါ “ “ငါက နငျ့အကို့ပျေါသစ်စာမဲ့မိပီလေ။ အခုလိုဖွဈကွတာလဲ ငါကိုယျတိုငျ လကျခံမိလို့လေ။ လကျခံမိတယျဆိုတာလညျးး” မကျြရညျစလေးနဲ့ စကားရှမေ့ဆကျတဲ့ မိနှကေို ဖိုးထောငျက စူးစိုကျကွညျ့နရေငျး “ဘာဖွဈလို့လဲ ပွောလေ မိနှေ” မိနှလေညျး သကျပွငျးခရြငျး ငွိမျသကျနပေီး “အေးမူခဏခဏပွောတော့ နငျ့ရဲ့အပွုအစုအယုအယ အထိအတှကေို့ ငါ့မသိစိတျက လိုခငျြမိနတော ငါ့ကိုယျငါတောငျ မသိခဲ့ပမေဲ့ တကယျ့လကျတှမှေ့ာ ခှငျ့ပွုသလိုဖွဈသှားတာလေ။ ဒီတခါပဲ မှားပါရစတေော့ ဖိုးထောငျ။ အခုလိုဖွဈသှားခဲ့တာလညျး ဘယျသူမှ မသိပါစနေဲ့။ မလေ့ညျး မထေ့ားပေးပါ ဖိုးထောငျ။” “သွျော မိနှရေယျ ။ ငါ ဘယျသူ့မှမပွောပါဘူးဟာ။ ဒါပမေဲ့ အကိုကွီး ကိုဇျောအပျေါ မတရားသလိုဖွဈသှားခဲ့ပီ။ “ “ကိုဇေျာ့အတှကျ နငျစိတျမပူပါနဲ့။ ငါ့ကိစ်စ ငါ့ဘာသာ ဖွရှေငျးမှာပါ။ မိုးလညျးစဲပီ။ အေးမူလာကွိုတော့မှာမသိဘူး သှားကွရအောငျ” လယျစောငျ့တဲ့အပွငျမှာ အစောက သညျးထနျစှာရှာပမေဲ့ အခုတော့ ဖွိုးဖွိုးဖြောကျဖြောကျ မိုးပေါကျကသြံလေးနဲ့ ဖှဲဖှဲမြှရှာကလြို့ တိတျဆိတျနပေမေဲ့ နှဈဦးသားရငျထဲမှာတော့ မမေ့ရနိုငျသောဖွဈပကျြမှုအတူ အတှေးကိုယျစီလှငျ့မြောရငျး အေးမူရဲ့လှညျးကိုသာ စောငျ့ကွိုနမေိပွီ။
မိနှလေညျး ဖိုးထောငျနဲ့မှားယှငျးမိပွီး တဈပတျခနျ့ ယာတောကို အကွောငျးပွခကျြမရှိပဲ မသှားတော့သဖွငျ့ ဖိုးထောငျမှာ စိုးရိမျပူပနျမိပီး မိနှနေဲ့ကာမ ဆကျဆံခဲ့တာကို အတှေးထဲဝငျလာတိုငျး မဖွဈသငျ့တာသိရကျနဲ့ တခါတလပွေနျတမျးတမိရာ အေးမူနဲ့သာ အခဈြစဈပှဲတှေ အခါခါနှဲလို့ လကျမထပျခငျ ကိုယျဝနျမရှိရအောငျ မွို့ပျေါရောကျခြိနျမှာ သန်ဓတေားဆေးကို ဝယျယူရာ မိနှကေို သတိရပီး ဆေးတကဒျပိုဝယျခဲ့ပွီး မိနှကေို ဆေးစားဖို့အတှကျ ကွံဆောငျရအုံးမညျ။ မွို့ပျေါမှာ ပှဲစားအလုပျတဖကျဖွငျ့ အကိုကွီးကိုဇေျာ့ကို တှရေ့တော့ ဖိုးထောငျ မကျြနှာမထားတတျ ဖွဈနပေမေဲ့ အကိုကွီးကတော့ ဘာမှမသိသလို ပုံမှနျအနအေထားနဲ့ ဖိုးထောငျအား “ညီလေး မွို့ပျေါလာတာနဲ့ အတျောပဲ။ ငါ့ညီလညျး အတျောစှံနတေယျကွားတယျနော။ အေးမူနဲ့ဘယျတော့
ယူကွမှာလဲ” “နောငျနှဈလောကျမှ အကိုကွီးရာ။ ပိုကျဆံလေးစုလိုကျအုံးမယျ။ ငယျလညျးငယျသေးတယျလေ ဟီးး ဟီးး” “ဘာငယျတာလဲ ဟငျး ညီအကိုခငျြး မသိခကျမယျ ငါ့ညီ ။ သွျော ဒါနဲ့ မိနှအေတှကျ စာယူသှားပေးအုံး။ အရေးကွီးတယျနျော။ ရှာရောကျတာနဲ့ မိနှကေို ဆကျဆကျပေးလိုကျနျော။ သူ့ဆီက စကားကွောငျးပွနျမှာလဲ အကိုကွီးဆီ မွို့ပျေါလာမဲ့စိတျခရြသူကို ခကျြခငျြးပါးပေးအုံးနျော ညီ” “ဟုတျ ဟုတျ အကိုကွီး ။ ကနြျောပွနျပီနျော နောကျကနြရေငျ ကားမမှီမှာစိုးလို့” ဖိုးထောငျလညျး ကိုဇျောပေးလိုကျတဲ့စာအိတျကို သခြောထညျ့သိမျးပီး ရှာသို့ပွနျခဲ့တယျ။
ညနမှေောငျရီပြိုးစအခြိနျမှာတော့ ဖိုးထောငျတယောကျ မိနှတေို့အိမျသို့ ရောကျလာပီး “အဒျေါ. ဂြီးဒျေါထှေး မိနှရှေိလား” “ရှိပါ့တျော ဖိုးထောငျ။ လကျထဲကဂြိုငျ့က ဘာတုနျးဟဲ့ “ “အဒျေါစားဖို့ ကွကျကာလသားခကျြ ယူလာတာ ။ အခုည ကိုသာကြျောတို့အိမျမှာစုပွီး ပြျောပှဲစားလုပျမလို့လေ အဒျေါ ။ အဲဒါကွောငျ့ မိနှလောမလား လာမေးတာ” “မိနှသော သှားမေးခြေ။ ဟဲ့ မိနှေ ဒီမှာ ဖိုးထောငျရောကျနတေယျ” ဖိုးထောငျလညျး ဂြီးဒျေါထှေးအား ဟငျးဂြိုငျ့ပေးပီး မိနှဆေီသှားပီး “မိနှေ ဒီညတလငျးသိမျးပှဲ ပြျောပှဲစားလုပျမလို့ အေးမူလညျး လာမယျပွောတယျ နငျလာမှာလား” “အငျး ခဏလောကျပဲ လာဖွဈမယျမလား မသိ။ နငျတို့က အသောကျအစားတှေ ပါသေးတယျမလား။” “ထနျးရညျလောကျပဲ ပါတယျပါဟ ။ နညျးနညျးလေးပါ ။ တခါတလမေို့ အပြျောသကျသကျပါ မိနှရေယျ။ နငျတို့မိနျးကလေးတှကေ မုနျ့လုပျစားပီး စကားထှာဖှကျကွလေ။ ရော့ အကိုကွီးပေးလိုကျတဲ့စာ” ဂြီးဒျေါထှေး မကွားအောငျ အသံတိုးတိုးဖွငျ့ပွောပွီး စာအိတျကို လကျကြိတျတိုးပေး၍ “ညပိုငျးကြ နငျလာမယျဆိုရငျ အေးမူတို့အိမျဖကျက လာခဲ့နျော” “အဒျေါ ကနြျောပွနျလိုကျအုံးမယျ” “အေးဟဲ့ ဖိုးထောငျ ညကရြငျ ပြျောပှဲစားလုပျတာတော့လုပျပါ စကားမြားရနျမဖွဈကွနဲ့အုံးနျော” “ဟုတျ ဟုတျ အဒျေါ စိတျခပြါ ။ အပြျောသကျသကျပါ အဒျေါ” ဒီလိုနဲ့ညဦးပိုငျး လသာသာမှာ ပြျောပှဲစား သောကျစား ကစားကွအပွီး အေးမူလိုကျပို့ပီး “ဖိုးထောငျ ရော့ ဒီစာကို ကိုဇေျာ့ပေးလိုကျပါနျော” “အငျး ပေး ။ နငျ့ကိုလညျး ငါ ပေးစရာတခုရှိတယျဟ။
အိမျခဏလိုကျခဲ့ပါအုံး မိနှေ။” “ဘာပေးမှာမလို့လဲ ငါ မလိုကျခငျြဘူး ဖိုးထောငျ။ အိမျပွနျတော့မယျ” “မလိုကျလို့မဖွဈဘူး မိနှေ။ ဟိုနကေ့ကိစ်စအတှကျ နငျ့သောကျဖို့ ဆေးဝယျလာတာ အိမျမှာကနျြခဲ့လို့”ထနျးရညျနံ့နဲ့ တိုးတိုးလေးပွောလိုကျတဲ့ ဖိုးထောငျစကားက မိနှရေဲ့ရငျမှာ လှိုကျဖိုရပွနျပီ။ “ခဏလေးလိုကျခဲ့နျော မိနှေ”အသနားခံပွောရငျး မိနှလေကျကိုဆှဲကာ ဖိုးထောငျအိမျသို့ တိတျတဆိတျဝငျသှားပွီး အဖီတဲအတှငျးအရောကျ မိနှကေို ဖိုးထောငျက အမှတျမထငျ ဆှဲဖကျကာ “ငါ မမေ့ရဘူး မိနှရေယျ ရှူး ရှူး ပွှတျ” “အို့ အှငျ့ အု အု” ဖိုးထောငျရဲ့ ထနျးရညျအရှိနျနဲ့ လကျရဲဇကျရဲ နမျးရှုံ့kissဆှဲခွငျးကို အငိုကျခံရတဲ့ မိနှလေညျး ကာမအတှထေူ့းကို သိရှိထားတော့ ငွငျးဆနျပီး ရုနျးကနျပမေဲ့လညျး အားအငျမပါလှ။ “အို လှတျပါ ဖိုးထောငျရယျ။ ငါတို့က မဖွဈသငျ့ဘူးလေ ဟငျ့ အှနျ့” ဖိုးထောငျလညျး “မဖွဈသငျ့တာ ငါလညျး သိပမေဲ့ နငျ့ကို မမေ့ရဘူးဟာ။ ပွှတျ ပွှတျ” မိနှကေို kissဆှဲကာ နို့တှကေို ပှတျကိုငျရငျး ကှတျပဈြပျေါကို ဖကျလှဲလိုကျလိုကျပီး မိနှကေိုခှလြှကျ စောကျဖုတျကို လုံခညျြအပျေါက အုပျကိုငျပီး ပှတျပေးလိုကျရာ “အို့ အမေ့ ဖိုးထောငျ” မိနှရေဲ့ညှငျးသဲ့သဲ့ ညညျးတှားသံလေးက ဖိုးထောငျအတှကျ မီးစိမျးပွနပေီဆိုတာ သိလိုကျတော့ လုံခညျြကို ခြှတျပီး စောကျဖုတျကို ခဏမြှယကျပေးလိုကျရာ အရညျတှရှေဲပီး
တအိအိလေး တိုးတိုးလေးညညျးရှာနတေဲ့ မိနှပေေါငျတှထေမျးပီး စောကျဖုတျအဝကို လီးတပွေီ့း လိုးသှငျးလိုကျရာ “အားး ရှီးး” စီးကွပျလှတဲ့စောကျဖုတျထဲကို ဖိုးထောငျလီးကွီးက အတှငျးသားတှေ ထိုးခှဲပှတျဆှဲသှားတဲ့ အရသာက နှဈဦးလုံးအတှကျ ကာမမီးတှေ မငွိမျးသတျနိုငျအောငျ တောကျလောငျကွပီး ခပျကွမျးကွမျးဖွငျ့ ခရီးဆုံးထိတိုငျ အပေးအယူမြှမြှဖွငျ့ ဆငျနှဲကွပီလေ။
နှဈဦးသား ကာမဆန်ဒပွညျ့ဝလို့ ပွီးမွောကျသှားခြိနျမှာ တယောကျနဲ့တယောကျ ထပျလြှကျဖကျထားရငျး အနားယူခြိနျဝယျ “ဖယျတော့ ဖိုးထောငျ ငါ ပွနျတော့မယျ။ ပေး ဆေးကဒျ” “မဖယျခငျြတော့ဘူး မိနှရေယျ။ အခုလိုလေး ဖကျထားခှငျ့ရှိခငျြတယျ” “မဖွဈနိုငျပါဘူး ဖိုးထောငျရယျ။ နငျလညျးငါ့ကိုခဈြတာ မဟုတျသလို ငါလညျး နငျ့ကိုမခဈြဘူး ဖိုးထောငျ။ ဒို့နှဈယောကျလုံးက မထငျမှတျပဲ ကွုံခဲ့ရတဲ့အတှမှေ့ာ သာယာနမေိတာလေ။ ရှဆေ့ကျပီး ဒီလိုမဖွဈသငျ့
မကွုံဆုံသငျ့တော့ဘူး။ ရှလေ့ာမဲ့လပွညျ့ကြျော ဥပုဒျညမှာ ကိုဇေျာ့နဲ့ ခိုးရာလိုကျဖို့ နငျ့ဆီပေးတဲ့စာမှာ အခြိနျးအခကျြလုပျပွီးပီ။ ရှဆေ့ကျ အနအေထိုငျဆငျခွငျပီး ဖွဈခဲ့တာတှေ မထေ့ားကွရအောငျနျော” မိနှရေဲ့ အသံတုနျတုနျလေးကို ဖိုးထောငျကွားလိုကျရတော့ “ဟူးး အငျးပါ မိနှရေယျ။ အခုလိုဖွဈရတာလညျး ငါ့အမှားတှပေါ။ ငါ ဆငျခွငျပါ့မယျ မိနှရေယျ ။ ရော့ ဆေးကဒျ” မိနှကေို ဆေးကဒျပေးပွီး အိမျအထိလိုကျပို့ကာ သာလှနျးတဲ့လပွညျ့ညရဲ့ လဝနျးကွီးကို ဖိုးထောငျ ငေးမောရငျး ညနကျထိတိုငျ အတှေးစိတျတို့က ဖွဈပကျြခဲ့ အကိုကွီးကိုဇျောသိခဲ့ရငျဖွငျ့ တှေးတောရငျး ညနကျခဲ့ပွီလေ။
တပတျခနျ့အကွာမှာတော့ မနကျစောမွူနှငျးဝေ ရောငျနီသနျးခြိနျမှာ “ဟဲ့ ဖိုးထောငျ သား ဖိုးထောငျ ထစမျးအုံးကှဲ့” အမရေဲ့ ငိုသံပါပါ အိပျယာလာနှိုးတော့ ဖိုးထောငျလညျး အလနျ့တကွား နိုးထရငျး “ဟုတျ အမေ ထပွီ ထပွီ ။ အမေ ဘာဖွဈလို့လဲဟငျ” စောစောစီးစီး မကျြနှာမကောငျးလှတဲ့ အမကေို့ကွညျ့ရငျး
ဖိုးထောငျ ပွနျမေးလိုကျရာ “အီ”ကနဲ ငိုခရြငျး “ညက ငါ့တူ နငျ့အကို ငဇျောနဲ့မိနှတေို့ ကားတငျခိုးပွေးတာ လမျးမှာကားမှောကျလို့ နှဈယောကျလုံး ပှဲခငျြးပီး ဆုံးသှားပီတဲ့ သားရေ။ အခုပဲ မွို့ဂတျက ရဲအုပျလေး လာပွီးအကွောငျးကွားလို့တဲ့ အီး ဟီးး” ငိုနရေငျးပွောနတေဲ့ အမစေကားတှကွေောငျ့ ဖိုးထောငျရငျထဲ အံ့သွမှုမြားစှာဖွငျ့ နငျ့ကနဲ ခံစားလိုကျရပီး “အဖွဈဆိုးလှခညျြလား အကိုကွီးနဲ့မိနှရေယျ။ ဒါဆို မွို့ပျေါကို သားလိုကျသှားအုံးမယျနျော အမေ” “အငျး မငျ့ဘကွီးတို့ အခုသှားတော့မှာတဲ့ အမကေို့ လာပွောသှားတယျ။ ငါ့တူကွီး ကံမကောငျးရှာပါဘူးကှယျ” တရှုံ့ရှုံ့ငိုကွှေးနတေဲ့ အမကေို့ ထားခဲ့ပွီး ဘကွီးအိမျသို့ အပွေးတပိုငျးခွလှေမျးတို့ဖွငျ့ သှားရငျ မွို့ပျေါ သို့ ခရီးနှငျကွခဲ့ကွပွီး ဆေးရုံရငျခှဲရုံအတှငျးက ကိုဇျောနဲ့မိနှတေို့ရဲ့ ရုပျကလာဒျကို သခြောမွငျလိုကျရတော့ ဝမျးနညျးစှာ မကျြရညျကနြမေိပွီး ကိုဇေျာ့ရုပျအလောငျးအနားကပျပီး လကျဖဝါးတှေ ဆုပျကိုငျရငျး “ကနြျော မိနှနေဲ့မှားခဲ့တာ အကိုကွီး သိသညျဖွဈစေ မသိသညျဖွဈစေ ခှငျ့လှတျပါ။ အကိုကွီး ခှငျ့မလှတျနိုငျရငျလညျး နောငျဘ၀ သံသရာမှာ ညီလေးပွနျဆပျပါ့မယျ ကိုကွီး” စိတျထဲက တောငျးပနျရငျး “ကံဆိုးလှခညျြလား ကိုကွီးရယျ။ ကောငျးရာသုဂတိ လားလို့ ရောကျရာဘုံဝမှာ အခုလိုအဖွဈမြိုး မကွုံတှပေ့ါနဲ့လို့ ညီလေး ဆုတောငျးပေးနမှော” ပွောပွီး မကျြရညျမိုးတှေ ရှာသှနျးရငျး နဖူးပွငျမှာ ဒဏျရာသေးသေးလေးနဲ့ အိပျစကျနသေလိုနရှောတဲ့ မိနှနေဖူးပွငျလေးကို စမျးပွီး “အဖွဈဆိုးလှခညျြလား မိနှရေယျ။
ခဈြသူနဲ့ပေါငျးဖကျကံ ပါမလာတဲ့ နငျ့အတှကျ စိတျမကောငျးဘူး မိနှရော ဖွဈလရောဘဝတိုငျးမှာ နငျတကယျခဈြတဲ့သူနဲ့ စိတျခမျြးသာ ကိုယျကနျြးမာစှာနဲ့ သကျဆုံးတိုငျ ပေါငျဖကျနိုငျပွီး အခုလိုအဖွဈမြိုး မကွုံတှပေါစနေဲ့လို့ ငါ ဆုတောငျးပေးနပေါ့မယျ မိနှရေေ” စိတျထဲကစကားတှေ တီးတိုးရရှေတျရငျး “ကံမကောငျးရှာပါလား မိနှရေယျ”လို့ တိုးတိတျစှာ ညညျးတှားရငျး အံကြိတျထားသညျ့ကွားက မကျြရညျစကျတို့က ကဆြငျးရပွနျပွီ။ နှဆေိုတဲ့စာကားလုံးလေးကွားမိတိုငျး နှရေောကျလတေိုငျး လြှပျစီးလကျလို့ မိုးခွိမျးသံကွားရတဲ့နရေ့ကျတှေ၊ ဆောငျးဝငျလို့ တလငျးသိမျးတဲ့အခြိနျကာလ၊ လမငျးကွီး ထိနျထိနျသာတဲ့ လပွညျ့ညတှေ၊ မွူနှငျးဝတေဲ့ နံနကျလငျးခြိနျတှေ၊ အခြိနျကာလတှေ တိုကျဆိုငျမှုရှိလတေိုငျး သကျပွငျးသဲ့သဲ့ခလြို့ အဝေးကို ငေးမောတတျနတော ဖိုးထောငျတယောကျပါ။ ၃-နှဈဆိုတဲ့အခြိနျကာလတို့ ရာသီစကျဝနျး ရှပွေ့ောငျးလို့ လာခဲ့ပွီး မိုးဥိးကအြခြိနျလေးမှာ လြှပျစီးရောငျ တဝနျးဝနျး မိုးခွိမျးသံ တဂြိနျးဂြိနျး မိုးသညျးတဲ့ညနခြေိနျလေးမှာ “ဂြိနျး” “အဲ့ ဝူဝဲ ဝူဝဲ” မိုးခွိမျးသံနဲ့အတူ လသားအရှယျကလေးငိုသံက ပွိုငျဆိုငျနသေညျ့အလား ဆူညံနပွေီး “ကိုဖိုးထောငျ ကိုဖိုးထောငျ ထငျးထှေ ကမြ သိမျးလိုကျမယျ။ တော့သားလေး လာထိနျးကူပေးအုံး။ အခုလို မိုးခွိမျးတိုငျး ငိုတတျတဲ့ ရှငျ့သားလေးက ရှငျထိနျးမှ အငိုတိတျတတျတာ သိရကျနဲ့ မွနျမွနျလာ” ဖိုးထောငျလညျး သိမျးလကျစ ထငျးတှထေားခဲ့ပွီး ငိုကွှေးနတေဲ့ သားငယျလေးကို ပှခြေီ့ခြော့မွူရငျး မှေးရာပါ သားငယျရဲ့နဖူးပွငျက အမာရှတျလေးကို ငေးကွညျ့ရငျး မိနျးမအေးမူ ပွောသလို သူတို့သားလဟော မိနှလေူဝငျစားဖွဈခဲ့တာသခြောလို့ စကားပွောတတျ အရှယျရောကျလို့ စကားပွောခဲ့ရငျ ဖိုးထောငျရဲ့အတိတျ အရိပျတစ်ဆတှေကေ ခွောကျလှနျ့ရငျး ဟူးးး
သည်တနွေ လေပွေနဲ့အတူ စိတ်ရူးတွေလည်း လွင့်မျောဆဲ။ သည်တမိုး မိုးစက်နဲ့အတူ လျှပ်လက်လို့ ချိန်းလိုက်တိုင်း အတိတ်ဟောင်းကိုပဲ လွမ်းမိတယ်။ သည်တဆောင်း ရာသီတွေ ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း လယ်စောင့်တဲနားက သက်မချသံနဲ့ အဝေးကို ငေးနေဆဲပါ မိနွေရေ….။ သြော်… မိနွေ မိနွေ
ဟူးးး အတိတ်ဆီသို့ ဖိုးထောင်စိတ်တွေ လွင့်မျောနေမိတာက တိုက်ဆိုင်မှုများစွာဖြင့် ကြုံဆုံရတဲ့ နေ့ရက်များမှာပေါ့။ ပူပြင်းလှတဲ့ နွေနံက်ခင်းတခုမှာ “သားဖိုးထောင်ရေ အိပ်ယာထလေ မိနွေတို့ ထင်းကောက်ထွက်ဖို့ စောင့်နေကြပီ” “ရတယ် ဒေါ်လေး အဲဒီအိပ်ပုတ်ကို မိနွေ သွားနှိုးလိုက်မယ်” ပြောရင်း ဖိုးထောင်အိပ်နေတဲ့ အိမ်နောက်ဖေးအဖီတဲအတွင်း မိနွေ ဝင်သွားချိန်မှာ မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ ရင်ဖိုထိတ်လန့်စရာလေ။
နေ့ဖက်မှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ရှားရုန်းကန်ရပြီး အိပ်ရေးဆိုးတဲ့ဖိုးထောင်အိပ်နေပုံက ပူလွန်းတော့ ပုဆိုးက ခါးအထိလန်နေပီး သူ့ရဲ့ကြီးမားလှတဲ့လီးကြီးက မိုးထောင်လို့နေတာကို မိနွေမြင်လိုက်ရတော့ “အို တကယ်အကြီးကြီးပဲ သူ့အကို ကိုဇော်ပြောတာ ဟုတ်သားပဲ” လို့ စိတ်မှာတွေးရင်း စောက်ဖုတ်က ကျင်ကနဲ တချက်ရှုံ့သွားပီး ရင်ဖိုလှိုက်မောရင်း အဖီတဲအပြင်ဖက် အသာလေးပြန်ထွက်ကာ ထရံကို တဖုန်းဖုန်းပုတ်ပီး”ဖိုးထောင် ဖိုးထောင် ထတော့ဟဲ့ ထင်းကောက်သွားရမယ် နောက်ကျနေပီ ” အသံနည်းနည်းမြှင့်နှိုးလိုက်မှ ဖိုးထောင်လည်း လန့်နိုးလာပီး “ဟင် ထပီ ထပီ မိနွေ” ဟု ကပျာကယာ အိပ်ယာထလိုက်မှ မိမိဖြစ်ပျက်နေတာကို မိနွေမြင်သွားပီလား တွေးရင်း မျက်နှာသစ်ပီး အမေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ထမင်းထုတ်လေးဆွဲရင်း မိနွေတို့နဲ့အတူ တောထဲ ထင်းကောက်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။
ကိုယ်စီကိုယ်စီ ထင်းခြောက်အတူကောက်ပီး နေလည်းအတော်လေးမြင့်လာတော့ ” ဖိုးထောင်ရေ၊ မိနွေရ၊ ထမင်းကြမ်းစား ခဏနားရအောင်ဟေ့” အေးမူရဲ့ ဆော်သြမှုကြောင့် ခဏအမောဖြေရင်း မနက်စာ ထမင်းကြမ်းကြော် ဝိုင်းဖွဲ့စားပီး အေးမူအလစ်မှာ “မိနွေ ဒီည ကိုဇော်က တွေ့ချင်လို့တဲ့” တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်တော့၊ “ရှူး အိမ်ကအခြေအနေကောင်းရင် အေးမူအိမ် အလည်သွားမလို့ဆိုပီး ထွက်ခဲ့မယ်လို့ နင့်အကိုကို ပြောထားလိုက်” “အေးပါဟာ နင်တို့ကလည်း ယူမှာဖြင့်လည်း ခိုးပြေးကြဟာ ဘာတွေမှန်း မသိဘူး” “ကြားက အောင်သွယ်နေရတဲ့ငါ့ကို နင့်အဖေကြီက ရိပ်မိလား မသိဘူး။ တွေ့လိုက်တိုင်း ဘုကြည့် ကြည့်နေတယ်” “ဟယ် ဟုတ်ပါဘူး ဖိုးထောင်ရယ် အဖေက အဲလိုကြည့်နေကြပဲဟာ” “အင်းပါ နင်တို့ကို မိဘတွေ သဘောမတူတဲ့ကြားက ချိန်းပေးရတဲ့ ငါက ခေါင်းကျိန်းနေပီ” “သူများအချစ်ရေး ကူညီကောင်းပါတယ် ဖိုးထောင်ရယ်” “နင့်အတွက်လည်း အေးမူကို ငါပြောထားတယ် သိလား” ပြောရင်း ဖိုးထောင်ပေါင်ကို မိနွေပွတ်ရင်း ချော့လိုက်တော့ “အင်း အေးမူကို ငါယူဖို့အထိ စိတ်ကူးထားတာ””ဖွဂ့်မပြောရဲသေးလို့၊ ပီးတော့ တို့က ငယ်သေးတယ်လေ”
“အမယ် ဘာငယ်တာလဲ? လူကဖြင့် အခုမှ ၁၆နှစ်တဲ့၊ အေးမူသာ နင်နဲ့ ရည်းစားဖြစ်လို့ကတော့ မြင်ယောင်သေး။ အဟိ” “ဟင်! ဘာအဟိလဲ မိနွေ” “မနက်စောက ငါအိပ်နေတာ နင်မြင်သွားတာလား” “မြင်စရာလားဟဲ့ နင့်အကိုပြောလို့ သိထားတာ ကြာပေါ့” ဖိုးထောင်ကို လိမ်ညာပြောလိုက်ရပေမဲ့ မိနွေစိတ်ထဲ ပြန်မြင်ယောင်ပီး ကျက်သည်းများ ထလာရင်း ကျင်ကနဲ ရင်ဖိုမိပြန်တယ်။ “ဟာ မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေ ဘယ်သူ့မှလျှောက်မေ၊ပြာနဲ့နော် မိနွေ” “တော်ကြာ ရွာထဲမှာ ငါ့ကြိုက်မဲ့သူ မရှိပဲနေအုံးမယ်” “အေးပါဟဲ့ ပြောစရာလား ဟိဟိ” မိနွေ လျှာလေးထုတ်ရင်း ဖိုးထောင်ပေါင်ကိုပုတ်းရင်း ပြန်ပြောလိုက်ချိန်မှာ “ဟဲ့ ဖိုးထောင်နဲ့မိနွေ တိုးတိုးလေး တွတ်ထိုးမနေကြနဲ့ ရွာပြန်နောက်ကျလိမ့်မယ်။ ထင်းပြန်ကောက်ကြစို့” “နင်တို့နှစ်ယောက်က ကြိုက်နေကျပီလား?” “အမလေးတော် သူကြိုက်နေတာ ငါ့မဟုတ်ဘူးဟေ့။ နင့်ကို နင့်ကို” အေးမူရင်ပတ်ကို မိနွေလက်ထောက်ရင်း ပြန်ပြောလိုက်တော့ “အိုတော် မိနွေကလဲ ဘာမှန်းမသိ ဟိုကဖြင့် တုတ်တုတ်တောင်လှုပ်တာ မဟုတ်ဘူး” ရှက်စနိုး မျက်နှာပေးဖြင့် အေးမူက ပြန်ပြောပီး ထင်းကောက်ရန် အဝေးသို့ပြေးသွားသော အေးမူနောက်ကျောကို ငေးကြည့်နေရင်း အေးမူရဲ့ဖင်သားလုံးကျစ်ကျစ်လေးတွေ လှုပ်ခတ်သွားတာကို မြင်မိလိုက်တော့”ဒီညအတွက်လည်း မှန်းထုလိုက်အုံးမယ် အေးမူရေ” လို့ စိတ်ကူးရင်း ပြုံးရွင်စွာဖြင့် ထင်းကောက်ရန် လူစုခွဲလိုက်ကြပေမဲ့ ပုဆိုးထဲက လီးကြီးက ဆတ်ကနဲ တချက်တင်းတက်လာကို အနားမှာရှိတဲ့ မိနွေက အမှတ်တမဲ့ မြင်မိလိုက်ပြန်တယ်။
“ဖိုးထောင်တော့ အတော်ထန်မှာပဲ”လို့ တွေးလိုက်ရင်း မသိသလိုပဲ နေလိုက်ပီး ထင်းခြောက်များသာ ဆက်၍ကောက်လို့ နေလိုက်တယ်။ ထင်းခြောက်များ ကောက်ယူပီး ရွာရောက်လို့ မှောင်ရီပျိုးစမှာပဲ “ဒေါ်ကြီး ညီလေးဖိုးထောင်ရှိလား” “အေး ရှိသကွဲ့. နောက်ဖေးအဖီထဲ လှဲနေတယ်ထင်ပါရဲ့” “ဟုတ် ဒေါ်ကြီး ကျုပ်ပဲသွားလိုက်မယ်”လို့ ပြန်ပြောရင်း ကိုဇော်တယောက် ဖိုးထောင်ရှိရာ အဖီထဲလေးထဲဝင်ရင်း “ညီလေး မိနွေက ဘာပြောလိုက်လဲ လာမယ်တဲ့လား?” အသံခပ်အုပ်အုပ်လေး မေးလိုက်ရာ “အိမ်က အခြေအနေကောင်းရင်တော့ ထွက်လာမယ်တဲ့” “ညီလေးပဲ အေးမူတို့အိမ်မှာ လသာသာ စကားထှာဖွက်မယ်ဆိုပီး သွားခေါ်ပေးပါလား။ ကူညီပါ ညီလေးရာ ။ ငါ မင်းကို စာအုပ်ပေးဖတ်မယ်” စာအုပ်ဆိုတဲ့အသံကြားလိုက်တော့ ဖိုးထောင်လည်း တက်ကြွလာပီး “ဟုတ် ကိုကြီး ညီလေးစာအုပ်ဖတ်တာ ဘယ်သူမှ မသိစေနဲ့အုံးနော်”ဟု ပြောရင်း ခြေလှမ်းတို့က မိနွေအိမ်ကို ထွက်ခွာခဲ့ပီလေ။
” မိနွေရေ မိနွေ မိနွေရှိလား အဒေါ်” “ငါ ဒီမှာ ဖိုးထောင် ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ” မှင်သေသေနဲ့ ပြန်မေးတော့ “အေးမူတို့မှာ လသာသာနဲ့ စကားထှာဖွက်တိုင်း ကစားမလို့၊ နင်လိုက်မလားလို့ ငါလာခေါ်တာ”လို့. အသာလေးမျက်စိမှတ်ပြတော့ မိနွေလည်း “အမေ သမီးလိုက်သွားအုံးမယ်နော်”ပြောလိုက်ရာ “အေး ညမနက်စေကြနဲ့နော် ။ အပြန်လည်း လိုက်ပို့ပေးလိုက်နော် ၊ဖိုးထောင်” “ဟုတ် ဂျီးတော် သွားပီနော်”ဟု ပြောပီး ဖိုးထောင်နဲ့အတူ မိနွေလည်း အတူတူလိုက်လာရင်း အမြဲခိုးပီး ချိန်းတွေ့နေကြ ဖိုးထောင်ရဲ့အဖီထဲဆီသို့ တိတ်တိတ်ကလေး ဘယ်သူမှမရိပ်မိအောင် သွားနေရင်း “ဟဲ့ဖိုထောင် ဖြည်းဖြည်းသွားပါဟဲ့ ။ အမှောင်ရိပ်ကလည်း ခိုသွားအုံး သူများတွေမြင်သွားမှာလည်း ငါရှက်တယ်”ပြောရင်း ဖိုးထောင်အနားကပ်ပီး လမ်းအတူတူလျှောက်လိုက်ရာ ဖိုးထောင်ရဲ့တထောင်က မိနွေနို့အုံတင်းတင်းလေးကို ထောက်မိပီး ဖိုးထောင်စိတ်တွေ ဖျင်းကနဲ ကြွတက်လာပီး နေ့လည်က အေးမူရဲ့ဖင်လုံးလုံးလေးကို ပြေးမြင်လိုက်တာ လူပျိုရိုင်းရဲ့လီးကြီးက ပုဆိုးကြားမှာ တင်းကနဲဖြစ်လာတယ်။
အိမ်ခြံရှေ့ရောက်တော့ အမေ့အရိပ်အခြေအနေ မတွေ့တော့ မိနွေကို ကိုဇော်စောင့်နေတဲ့ အဖီထဲလေးထဲ ပို့ပေးရင်း “ကိုကြီး မိနွေရောက်ပီ ကျနော့ပေးစရာရှိတာ ပေး ။ တိုးတိုးတိတ်တိတ်လည်း ပြောကြအုံး ။ အိမ်အပေါ်ထပ်မှာ အမေအိပ်နေပီထင်တယ်” အသံခပ်အုပ်အုပ်ပြောပီး ကိုဇော်ရဲ့သူငယ်ချင်း မြို့ပေါ်က ငှါးလာတဲ့ အပြာရောင်မျက်နှာဖုံးစာအုပ်သေးသေးလေးကို လှမ်းယူရင်း “အေးမူတို့အိမ်ဖက် ခဏသွားပီ” လိမ်ညာပြောဆိုကာ ခြေဖွဖွနင်းပီး တဲအတွင်းက အကိုကြီးကိုဇော်နဲ့မိနွေတို့ရဲ့ ချစ်ကြည်နူးနေပုံကို သူတို့မမြင်အောင် ခိုးးခြောင်းကြည့်ဖို့ အိမ်အောက်ကို တွားသွားပီး ငြိမ်နေလိုက်တယ်လေ။ “လွမ်းလိုက်တာ မိနွေရယ် ရှူး” “အို အကိုကလည်း တွေ့တာနဲ့ မိနွေကို အတင်းဖက် တအားနမ်းတော့တာပဲ ။ ဒီမှာ အသက်ရှူကြပ်ပီး အနေရခက်တယ်ရှင့်” “ချစ်လို့ပါ မိနွေရယ် ပြွတ် ပြွတ်” ကိုဇော်လည်း မိနွေနှုတ်ခမ်းကို စုပ်ရင်း နို့အုံလေးကို အင်္ကျီပေါ်က အုပ်ကိုင်ပွတ်ချေရင်း “နွေလေး အင်္ကျီချွတ်မယ်နော် ။ နို့လေးတွေ ကိုကို တဒာားစို့ချင်ပီ””
“အာ ကိုကိုရယ် မသိဘူးဟာ မိနွေ အနေရခက်တယ် ။ ဟိုဟာတော့ မလုပ်ရဘူးနော် ။ မင်္ဂလာဦးညမှ ကိုဇော်ကို ခွင့်ပြုမယ်” ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ တီးတိုးချစ်ရည်လူးနေသံကို မမြင်ရပေမဲ့ ကြားနေရတဲ့ ဖိုးထောင်မှာတော့ ပုဆိုးထဲကလီးကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း အေးမူရဲ့ဖင်လှလှလေးကို မှန်းကာ ဖွဖွလေး ထုနေလိုက်ရင်း
“အမလေး ကိုကို မိနွေ အနေရအရမ်းခက်တယ် ။ ဖြည်းဖြည်းစို့ပါနော် အ အ ရှီးးး လက်က ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ ကိုကိုရယ် မိနွေဟာအထဲမှာ သေးပေါက်ချင်သလို ခံစားရတယ် အိ အ ရှီးး” ကိုဇော်လည်း ချစ်သူမိနွေရဲ့နို့တွေစို့ရင်း စောက်စိကို လက်မနဲ့ပွတ်ကလိရင်း စောက်ခေါင်းအတွင်းက လက်ညိုးလေးကို
ခပ်သွက်သွက်လေး ကစားပေးလိုက်ရာ မိနွေလက်တွေက ကိုဇော်လည်ပင်းကို တအားဖက်တွယ်ရင်း ခါးကြီးကော့တက်လို့ ခြေဖျားတွေ ကွေးသွားရင်း ဖင်ဆုံကြီးတဆတ်ဆတ်တုန်ကာ “အီးကနဲ”ညည်းညူ၍ ပီးမြောက်သွားပီလေ။
“နွေလေး ကောင်းလား “ “အင်း ကိုကို လူကို နှုံးသွားတာပဲ” “အဲဒါထက်ကောင်းတာ နွေလေး ခံစားဖို့ ဒီနှစ်ဆောင်းရောက်လို့ လယ်တွေသိမ်းပီးရင် လက်ထပ်ကြရအောင်နော်။ လောလောဆယ် ကိုဇော့်ကို ကြင်နာပေးအုံးနော်” ပြောရင်း ပုဆိုးချွတ်ထားတဲ့ လီးပေါ်ကို မိနွေလက်ကလေး တင်ပေးလိုက်ရာ
“ဟိ ကိုကို့ဟာလည်း အတော်တင်းနေပီနော်”ပြန်ပြောရင်း ဖွဖွလေး ထုပေးနေစဉ် မနက်စောကမြင်ခဲ့ရတဲ့ ဖိုးထောင်လီးကြီးကို စိတ်ထဲ မြင်ယောင်လာပီး ကိုဇော်လီးထက် ပိုကြီးပိုတုတ်တာ တွေးရင်း ကိုဇော်လီးကို တအားဖျစ်လို့ ခပ်သွက်သွက်လေး ထုပေးနေမိစဉ် “ဒား”ဟူသော အသံနဲ့အတူ ဗြစ်ကနဲ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထွက်ရင်း “ကောင်းလိုက်တာ နွေလေးရယ် ။ ဒီညလုပ်ပေးတာက အရင်ကထက် ပိုကောင်းသလို ခံစားမိတယ် မိနွေရယ်” မိနွေပါးလေးကို အနမ်းခြွေရင်း ကိုဇော်အသံကြားရင်း အပြင်က ခိုးပီးနားထောင်နေတဲ့ ဖိုးထောင်လည်း သုတ်ရည်တွေကို မြေပေါ်သို့ ပန်းထုတ်ရင်း အေးမူကို အမြန်ချစ်ခွင့်ပန်ဖို့ ဆုံးချက်ချလိုက်ပီလေ။
ဖိုးထောင်တယောက် အကိုဝမ်းကွဲ ကိုဇော်တို့စုံတွဲ ချစ်ရည်လူးတဲ့ အသံတွေရယ် မျက်နှာဖုံးအပြာထဲက ကာမဆက်ဆံနည်းတွေ ဖတ်ရင်း ဂွင်းထုလိုက် လေ့လာမှတ်သားလိုက်ဖြင့် တကယ့်လက်တွေ့ ကာမဆက်ဆံကြည့်လိုစိတ်တွေ ထကြွလာပီး ရင်ထဲကကျိတ်ပီး ချစ်နေရတဲ့ အေးမူကို ဖွင့်ပြောဖို့ မိနွေလည်း ပြောခိုင်းပီး သူကိုယ်တိုင်လည်း ချစ်ကြိုက်နေကြောင်း ဖွင့်ဟလို့ ချစ်ခွင့်ပန်လိုက်ရာ မခူးခင်က ညွှတ်ချင်နေတဲ့ အေးမူလည်း ဖိုးထောင်အချစ်ကို
လက်ခံပြီး အသိအမှတ်ပြုလိုက်ရာ ကိုဇော်နဲ့မိနွေလို လူခြေတိတ်တဲ့ ညနက်တွေမှာ အေးမူတို့အိမ်နောက်ဖေးက မန်ကျီးပင်ရိပ်နဲ့ နွားစာတဲအတွင်း အခါအခွင့်သင့်သလို ခဏခဏချိန်းတွေ့ပါများပီး ဖိုးထောင်ရဲ့ လေ့လာစမ်းသပ်တဲ့ အပွတ်အသပ် အကြင်နာတွေအကြားမှာ အရိုင်းစပယ်
အေးမူတယောက် သာယာနစ်မွန်းလို့ ချစ်တဲ့သူဖိုးထောင်အား ဘဝကိုပုံအပ်လိုက်ရင်း သောက်လေသမျှ အငတ်မပြေတဲ့ ဆာငန်ရေကို နွားစာတဲထဲမှာလည်း ချစ်ရည်လူး ယာတောအတူသွားရင်း လယ်စောင့်ထဲမှာ လူလစ်တိုင်း ချစ်ခြင်းပြိုင်ကြရာဝယ် သူတို့နဲအမြဲလိုလို အတုသွားအတူလာများတဲ့ မိနွေလည်း
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူတို့ဆက်ဆံတာကို ရိပ်မိလာတယ်။
မိနွေလည်း ကိုဇော်နဲ့ အခွင့်သာသလို ချိန်းတွေ့နေပေမဲ့ သူ့ရဲ့အပျိုစင်ဘဝကို မင်္ဂလာဦးညမှ ပုံအပ်ဖို့ အားတင်းထားလည်း မြင်ဖူးထားတဲ့ဖိုးထောင်လီးကြီးကို ပြန်တွေးတိုင်း စိတ်ထဲမှာ အမည်ဖော်မရတဲ့ခံစားမှုတခု ဖြစ်ဖြစ်လာပီး စောက်ဖုတ်ကလည်း ကျင်ခနဲဖြစ်တတ်နေတာ ကြာခဲ့ပီ။ ကိုဇော်နဲ့ချိန်းတွေ့ဖို့ ကြို/ပို့လုပ်ရာ ညတွေမှာလည်း မိနွေက ဖိုးထောင်ဒာား ပွတ်သီးပွတ်သပ်တွေ လုပ်မိနေတတ်တယ်။ ဖိုးထောင်လည်း အကို့ချစ်သူ ငယ်သူငယ်ချင်းမို့ မဖြစ်သင့်မှန်း
သိပေမဲ့လည်း တခါတလေ မိနွေခါးလေး ပြန်ဖက်မိရင်လည်း ငြိမ်နေတတ်တဲ့ မိနွေကို သွေးတိုးစမ်းချင်လာခဲ့တယ်။ “မိနွေ နင်တို့လည်း ယူကြတော့လေ ။ ငါနဲ့အေးမူတော့ နောက်ထပ် ၂ နှစ် ၃နှစ်ဆို လက်ထပ်ဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်” “သိပါတယ် ဖိုးထောင်ရယ် အေးမူ နင့်အပေါ် ဘယ်လောက်ထိချစ် ဘယ်လိုထိ တန်းတန်းစွဲနေတာ အေးမူပြောထားလို့ အကုန်သိ၊ ဟိ ဟိ” “အာ အေးမူတော့ လုပ်ချလိုက်ပီ ။ တွေ့မှ နာပီသာမှတ်” “ဟိ ဟိ အေးမူကလည်း အဲဒီနာတာလေးကို သဘောကျတာတဲ့” “ဟာ ပြောမိမှ ပိုဆိုးနေပီ နင်လည်း အကိုကြီးကို နာအောင်လုပ်ခိုင်းပေါ့” “နင့်အကိုကြီးက ငါ့ကို တန်ဖိုးထား သစ္စာရှိတယ် သိလား ။ နင်တို့လို ယွပိုးထမနေဘူး ဟွန်း” “အေးပါဟာ ငါ ရိပ်မိပါတယ် ။ ငါသာအကိုကြီးနေရာဆို နေနိုင်ပါဘူး။ ဟီးး” ” မသာ ကောင်စုပ် နင့်အကိုကြီး တိုင်လိုက်မှာနော် “ “ဟာ အကိုကြီးတော့ မတိုင်ပါနဲ့နော်။ ငါက သူ့ငယ်ချင်းမလို့ စတာပါ၊ တော်ကြာ ကိုဇော့်လက်သီးစာ ငါ မိနေပါ့မယ်” “မသိဘူး တိုင်မှာပဲ”ဟု ပြန်ပြောခဲ့ပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျ မိနွေ ပြန်မပြောခဲ့ပါ။
မိုးနှောင်းလို့ ကောက်လှိုင်းတွေ သိမ်းနေတဲ့တရက်မှာတော့ ဖိုးထောင်၊အေးမူနဲ့မိနွေတို့ အတူတူတလင်းသိမ်းလို့ နေ့လည်စာစားပြီးချိန်မှာ အေးမူက ဖိုး ထောင်ကို အသာလက်တို့ပီး “ဖိုးထောင် အိမ်ကအမေမှာလိုက်လို့ ကိုဇော်တို့လယ်ကန်သင်းဘောင်က ကန်စွန်းရွက် သွားခူးမလို့ ။ နင် ငါ့ကို ကူခူးပေးဖို့ လိုက်ခဲ့အုံး” “အင်း သွားကြမယ်လေ။ ငါလည်း နွားတွေ စားကျက်ပြောင်းရမှာနဲ့ အတော်ပဲ” ချစ်သူနှစ်ဦး ဘာကြောင့် အတူတူထွက်သွားတာ မိနွေ ရိပ်မိတယ်လေ၊ သူတို့ထွက်သွားပီး ဆယ်မိနစ်ကျော်လောက်မှာ ကိုဇော်တို့ လယ်စောင့်တဲအနား ခြေသံဖော့ဖော့လေး နင်းလျှောက်ပီး တဲအတွင်းကို
ခြောင်းကြည့်လိုက်စဉ်မှာ တွေးတင်ထားသည့်အတိုင်းပဲ ကွပ်ပျစ်ပေါ်ပက်လက်လှန်နေတဲ့ အေးမူရဲ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဖိုးထောင်က ထမ်းထားပီး အင်္ကျီလန်နေတဲ့ အေးမူရဲ့ နို့တွေစို့ရင်း ဝါးကြမ်းခင်းလေး တကျွိကျွိမြည်နေအောင် ဆောင့်လိုးနေလိုက်တာ မိနွေ မြင်ရလိုက်တော့ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေက ယားသလိုလို ခံစားမိလာတယ်။ ဖိုးထောင်လီးကြီး ဝင်ထွက်လိုက်တိုင်း အေးမူစောက်ဖုတ်က တစွပ်စွပ်အသံလေးတွေက မိနွေအတွက် ရေဆာသလို လှိုက်မောလာပီး လက်ကအလိုလို စောက်ဖုတ်ကို လုံချည်ပေါ်က အုပ်ကိုင်ရင်း ပွတ်မိလာတယ်။ “အမလေးးး ကိုရယ် ဖြည်းဖြည်းလေး ဆောင့်ပေးပါအုံး အား ရှီးး” ခေါင်းလေးတခါခါနဲ့ ညည်းနေတဲ့ အေးမူရဲ့အသံက ဖိုးထောင်အတွက် စိတ်ပိုကြွလို့ လိုးချက်တွေက တဖြန်းဖြန်းမြည်အောင် ပိုသွက်လာပီး “အ. အမေ့ ကို့ အမလေးး အမလေး ” အသံတွေက မိနွေအဖို့ ဒူးတွေညွတ်ခွေပီး နို့အုံတွေပါ တင်းလာပီး ရင်တွေတုန်လာခဲ့ပီလေ။ “ကောင်းလိုက်တာ မူရယ် ရှူးး ။ကို့ကို လေးဖက်ကုန်းပေးအုံး” တဲအတွင်းက ကာမဘုံမှာ စိတ်နစ်နေတော့ အပြင်ကခိုးကြည့်နေတဲ့ မိနွေကို မသိရှာပေမဲ့ မိနွေတယောက်တော့ အေးမူစောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်ထွက်နေတဲ့ ဖိုးထောင်လီးကြီးရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေမြင်ရတိုင်း စောက်ဖုတ်အဝက ရှုံ့သွားပီး အရည်တွေစိမ့်ကျနေပီ။
လေးဘက်ကုန်းထားတဲ့ အေးမူခါးကို ဖိကိုင်ပီး နောက်ကိုပြူးထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို လီးကြီးဆောင့်သွင်းတိုင်း စောက်ဖုတ်နခမ်းသားတွေ ချိုင့်ဝင်သွားပီး လီးကြီးအထုတ်မှာ လီးနဲ့ကပ်ပါလာတာတွေက မိနွေရဲ့စိတ်ကို ညို့ယူနေတယ်လေ။ တချက်တချက် ဘူကနဲ လေပြန်သံတွေ ထွက်လာပေမဲ့ တဟင်း ဟင်း ညည်းပီး အလိုးခံနေတဲ့ အေးမူကိုလည်း အံ့သြနေမိတယ်။ ” အ အမလေး ကို အေး အေးမူ ပီးချင်ပီ ဆောင့် ဆောင့်” “အားး အ ကိုလည်း ပီးး ပီးး” အေးမူဖင်သားတွေနဲ့ ဖိုးထောင်ဆီးစပ်တို့ တဖြန်းဖြန်း ရိုက်သံနဲ့အတူ ဖိုးထောင်လည်း တွန့်ကနဲ တွန့်ကနဲ တုန်သွားပီး ကွပ်ပျစ်ပေါ်မှောက်ရက်လဲသွားတဲ့ အေးမူရဲ့ကျောပေါ်ကို ရှူးကနဲ နှာမှုတ်သံနဲ့ ထပ်ရက်ဖြစ်သွားတဲ့ သူတို့နှစ်ဦးကို ကြည့်ရင်း မိနွေလည်း လယ်စောင့်တဲထရံကို ယောင်ရမ်းကိုင်မိသည်အထိ
ညွှတ်ခွေကျသွားခဲ့ပီ။ “ချွတ်”ကနဲ အသံသဲ့သဲ့ကို မှိန်းနေရင်းနဲ့ ဖိုးထောင်ကြားမိလိုက်ပေမဲ့ ထမကြည့်တော့ပဲ မိနွေဖြစ်မှာ သိနေတော့ “အေးမူ ကိုလိုးပေးတာ ကောင်းလား? ကိုတော့ လိုးကောင်းလွန့်လို့ အေးမူကို လက်ထပ်ချင်လှပီ” “အင်း ကို ကောင်းလည်းကောင်း နာလည်နာတယ်။ ကို တအားဆောင့်
လိုက်တိုင်း ကို့ဟာကြီးက အေးမူရဲ့ဟွာထဲ ပြည့်ကြပ်ပီး သားအိမ်အထိ အောင့်ကနဲ ကျင်ခနဲ့ဖြစ်ပီး အေးမူတကိုယ်လုံး နတ်ပူးသလို အကြောစုံ
တုန်ခါသွားတယ်။ အေးမူလည်း ကိုနဲ့အတူတူ နေချင်ပီ၊ ကိုကျွေးနေတဲ့ ဆေးကဒ်လည်း မစားချင်တော့ဘူး ကို” “နောက်နှစ် ဝါမဝင်ခင် နားဖောက်ပီး
အခုလိုလေး အေးမူရဲ့ဖုတ်ထဲ တရားဝင် အကြာကြီး စိမ်ထားလိုက်ချင်ပီ” “ဟွန့် ကိုပို ဖယ်တော့၊ ဟိုမှာ မိနွေက ကြာနေလို့ လိုက်လာမှ မြင်လို့မကောင်း ဖြစ်နေအုံးမယ်” မိနွေ အကုန်လုံး မြင်ခဲ့ကြားခဲ့ပီး တလင်းပြင်ကို ပြန်သွားတာ ချစ်တလင်းမှာ ချစ်ခြင်းပြိုင်ရင်း ကြည်နူးနေတဲ့ အေးမူ မသိရှာ။ မိနွေရင်ထဲမှာတော့ သစ္စာရှင်ကိုဇော်ဆီ အတွေးရောက်လိုက် ဖိုးထောင်နဲ့အေးမူတို့ရဲ့ ကာမဆက်ဆံပုံတွေ ပေါ်လာလိုက်နှင့် နီးစပ်ဖို့ ခက်ခဲလွန်းတဲ့ ရှေ့ရေးကို အတွေးနယ်ချဲ့ရင်း ထိုင်နေစဉ် “ဟဲ့ မိနွေ ဘာတွေ တွေးပီး ဘာတွေ ငေးနေတာလဲ” အေးမူအသံကြားမှ အတွေးအာရုံတွေ သတိပြန်ဝင်လာပီး “ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး အေးမူရယ် ။ အိမ်ကလည်း ကိုဇော့်ကို နွမ်းပါးချို့တဲ့တော့ သဘောမကျ ။ ကိုဇော်ကလည်း သတ္တိနည်းတာလား၊ တွေဝေတာလား ဝေခွဲမရတော့ ငါတို့ရဲ့ရှေ့ဆက်ရမဲ့ခရီးကို စဉ်းစားနေတာပါ အေးမူရယ်” “ကိုကြီးကိုဇော်လည်း မထုံတက်သေးနဲ့ ဘယ်လိုကြီးမှန်း မသိဘူး ။ ငါ မေးတော့ အခု နွေမဝင်ခင် နင့်ကို တောင်းရမ်းမယ် ပြောတာပဲ ။ နင့်မိဘတွေက သဘောမတူရင် ခိုးပြေးဖို့အတွက် မြို့က အကိုကြီးရဲ့ သူငယ်ချင်းကို မော်တော်ကားစီစဉ်ခိုင်းထားတယ် ပြောတာပဲ” “နင့်အိမ်က သဘောမတူရင် ခိုးရာနောက်သာ လိုက်တော့ မိနွေ ။ အေးမူတို့လည်း နောင်နှစ်ဝါကျွတ်ရင် လက်ထပ်ဖို့ တိုင်ပင်ထားပီ” “အေးပါဟယ် နင်တို့က အခုတောင် လက်ထပ်နေချင်ကြပြီမလား ။ မသိ ခက်မယ်နော် ကောင်မ ။ ပြော မပြောချင်ဘူး ဟွန်း” “ဟိ ဟိ နင်ကလဲ တို့က တအားချစ်ကြလို့နော်” မိနွေအား ရှက်စနိုးဖြင့် အေးမူက ရိုက်ပုတ်ကျီစယ်လိုက်ရာ ဖိုးထောင် မကြားအောင် အေးမူအနားကပ်ပီး မိနွေက “ဖိုးထောင်ကို ချစ်တာလား? ဖိုးထောင်ရဲ့ထောင်နေတာ ချစ်တာမလား?
ကောင်မ တအားယွနေ ။ သူငယ်ချင်းချင်း လာဖြီးမနေနဲ့ ဟွန်း” “ဟိ ချစ်လို့ ဘဝကိုပုံအပ်ထားတာပါနော် ။ သူ့ အပြုအစုကောင်းတော့ပိုပြီး ချစ်ခင်စွဲလန်းနေ ရတာလေ ။ နင်လည်း ကိုဇော့်ကို ပြုစုကြင်နာခိုင်းဖို့ မြန်မြန်လက်ထပ်ကြတော့” “ဟိတ် ဟိုနှစ်ယောက် တိုးတိုးလေးနဲ့ ဘယ်သူ့အတင်းပြောနေကြတာလဲ? နေစောင်းတော့မယ် အကုန်သိမ်းဆည်းပြီး လှည်းပေါ်တင်ထားနှင့် ။ ငါ နွားတွေ သွားကောက်လိုက်အုံးမယ်ဟေ့” သုံးယောက်သား ကိုယ်စီ လုပ်ဆောင်စရာများအပြီး ရွာသို့ပြန်ခဲ့ကြပီလေ။ နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ “မိနွေရေ မိနွေ” အိမ်ရှေ့က အေးမူခေါ်သံကြောင့် “ဘာတုန်းဟဲ့ အေးမူ ။ စောစောစီးစီး” “ငါ ဒီနေ့ အမေနဲ့ ဟိုဖက်ရွာ ခဏသွားစရာရှိလို့ဟဲ့ ။ အဲဒါကြောင့် နင်နဲ့ဖိုးထောင် ယာတောထဲ သွားနှင့်နော် ။ ညနေပိုင်းလောက်မှ လှည်းနဲ့ ငါလိုက်လာခဲ့မယ်။ အဲဒါ လာပြောတာ မိနွေ” “အေးပါဟယ် ဖိုးထောင်လည်း ငါပြောပီး သွားလိုက်ကြမယ် စိတ်ချ။ တလင်းသိမ်း လက်စသတ်ဖို့ကလည်း နည်းနည်းပဲ ကျန်တော့တာပဲလေ။ ငါတို့နှစ်ယောက်နဲ့ ရပါတယ် အေးမူရယ်” “အင်းပါ ငါ သွားပီနော် မိနွေ” ပြန်ထွက်သွားတဲ့ အေးမူကို ငေးကြည့်ရင်း မနေ့က အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်လည်သတိရမိပြီး မိနွေရင်ထဲမှာ လှိုက်ဖိုမောရင်း သက်ပြင်းလေး မျှင်းမျှင်းချမိလိုက်တယ် ။
လယ်တလင်းရောက်လို့ ဖိုးထောင်နဲ့မိနွေလည်း တလင်းကို လက်စသိမ်း သိမ်းဆည်းနေရင်း “မိနွေရေ အကိုကြီးတော့ နင့်ကိုခိုးပြေးဖို့ မြို့က သူ့သူငယ်ချင်းကို ကားစီစဉ်ခိုင်းထားတာ ဘယ်လိုအခြေအနေရှိပီလဲဟ” “ဆောင်းမကုန်ခင် လယ်လုပ်ခတွေရတာနဲ့ ခိုးမယ်ပြောတာပဲ ။ အခုတောင် ပိုက်ဆံပိုရအောင် ပွဲစားကိုဘအောင်နဲ့ လုပ်အားစိုက်ပီး နောက်လိုက်အကူလုပ်ပါ အချိန်ရသလို လုပ်ပေးနေတာ အဆင်ပြေပီး နည်းနည်းတော့ စုမိဆောင်းမိပြီတဲ့” “ဝမ်းသာပါတယ်ဟာ မြန်မြန်ယူကြတော့ မိနွေ ။ ငါ့အကိုကြီးလည်း အနေအေးလွန်းတော့ နင်ကယ်မှပဲ လူပျိုဘ၀ ကျွတ်တော့မှာဟ” “ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ငါက ကိုဇော့်ကို လက်တွဲသွားမှာပါ ဖိုးထောက်ရယ်” “ငါ့အကိုကြီး ကံကောင်းပါတယ် ။ ငါသာ အကိုကြီးနေရာဆို အခုချိန်ထိ စောင့်မနေဘူး” “ဟွန်းနော် ဖိုးထောင် ။ ကိုဇော့်က နင့်လိုမဟုတ်ဘူး။ မသိခက်မယ်နော်၊ ဖိုးထောင်” မိနွေရဲ့ မျက်စောင်းနဲ့အတူ အဓိပ္ပါယ်ပါသော စကားလုံးများက ဖိုးထောင် ရှက်သွားပီး သွားကြီးဖြီးလို့ တဟီးဟီးရယ်ပြလိုက်ရတယ်။ “ဟောတော့ အချိန်ခါမဟုတ် မိုးတွေ ညို့လာပီ ဖိုးထောင်ရေ “ “ဟာ ဟုတ်သားပဲ ။ မြန်မြန်အုပ်ဆိုင်းပီး အေးမူလာတဲ့အထိ စောင့်ရမှာပဲ” “မိုးရွာရင် ခိုဖို့ ကိုဇော့်တို့ လယ်စောင့်တဲပဲ နီးတယ်နော် ။ ငါက မိုးရွာတာထက် လျှပ်စီးလက် မိုးခြိမ်းတာ ကြောက်တယ် ဖိုးထောင်” “ငါရှိပါတယ်ဟ မိနွေရယ် ။ အခုတောင် မိုးက ကျလာပီ ။ လာ လာ မိနွေ အကိုကြီးတို့တဲမှာ မိုးခိုပီး အေးမူကို စောင့်ကျရအောင် “ နှစ်ဦးသား အပြေးတပိုင်းဖြင့် ခပ်သွက်သွက် သွားရင်း တဲအတွင်းအရောက်မှာ မိုးက အငြိုးနဲ့ရွာသည့်အလား သည်းသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းလို့ ဝင်းကနဲ လျှပ်စီးတချက် လက်လာပီး “ဂျိ န်း”ကနဲ မိုးခြိမ်းသံက မိနွေတယောက် “အမလေး” ယောင်ရမ်းအော်မိလိုက်ပီး အနားမှာရှိတဲ့ ဖိုးထောင်လက်မောင်းကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။
“မကြောက်ပါနဲ့ မိနွေ ။ ငါရှိပါတယ်ဟ ။ အချိန်အခါမဟုတ် တလင်းဖျက်မိုးကလည်း တအားရွာလိုက်တာ” ညည်းတွားသံနဲ့အတူ မိနွေအား အားပေး စကားပြောနေစဉ် “ဂျိန်း ဂျိန်း ဒလိန်း” ဆက်တိုက်မိုးခြိမ်းလိုက်ရာ ဖိုးထောင်ကို မိနွေဖက်ထားမိအောင် ကြောက်လန့်ဖွယ် ခြိမ်းလိုက်ရာ မိမိအား ဖက်ထားတဲ့မိနွေခါးကို ဖိုးထောင်လက်တွေက ပြန်ဖက်မိပြီလေ။ “တအားကြောက်နေလား မိနွေ ။ ငါ ဖက်ထားမယ်နော် ။” ခေါင်းလေးညိမ့်ပြရင်း အသားတွေ တုန်နေတဲ့ မိနွေကို ခပ်တင်းတင်းလေး ဖက်ထားလိုက်ရာ အထိအတွေ့တို့က မနေ့ကပဲ ဒီတဲအတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကို နှစ်ဦးလုံးအတွက် သတိရစရာ ဖြစ်လာပီလေ ။ ” မိနွေ” တိုးတိုးလေးခေါ်လိုက်သံကြောင့် ခေါင်းလေးမော့ပီး ကြည့်လာတဲ့ မိနွေမျက်ဝန်းတွေကို ဖိုးထောင် ရင်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ရင်း လက်တွေက မိနွေတင်ပါးကို ပွတ်နေမိရာ မိနွေလည်း ညိမ်ခံနေမိတယ်။ ဖိုးထောင်လက်တဖက်က မိနွေမေးစေ့ကို ကိုင်သည်အထိ စိတ်ရိုင်းတွေ ဝင်လာပီး “မိနွေ”လို့ ထပ်ခေါ်လိုက်ရာ “ဟင်”ဆိုတဲ့ တခွန်းထဲသော အသံနဲ့ အရည်လဲ့နေတဲ့ မိနွေမျက်ဝန်းတွေကြောင့် တလှုပ်လှုပ်လေး ဟနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖိုးထောင် ပြွတ်ကနဲ တအားစုပ်ယူရင်း မိနွေကို ကွပ်ပျစ်ပေါ်ဖက်လှဲရင်း လက်တဖက်က အင်္ကျီပေါ်မှ နို့အုံကို အုပ်ကိုင်ပွတ်ချေနေလိုက်ရာ “ဖိုး ဖိုးထောင် မလုပ်သင့်ဘူးလေဟာ”လို့ ငြင်းဆန်ပီး ရုန်းနေပေမဲ့ မိနွေလက်တွေက အားမပါလှ ။
မိနွေပြောသမျှ ဘာမှမကြားသလို စိတ်အမှောင်ဖုံးနေတဲ့ ဖိုးထောင်က နှုတ်ခမ်းစို့လိုက် နို့တွေကို ပွတ်ချေရင်း ပါးတွေနမ်းရင်း အောက်ကလီးကြီးက ခွဖက်ထားတဲ့ မိနွေပေါင်သားတွေကို ထိုးကလိနေသလိုဖြစ်နေတာ မိနွေမသိစိတ်တို့က တအိအိ ညည်းလာရာ အတွေ့အကြုံရှိထားတဲ့ ဖိုးထောင်လက်တွေက မိနွေအင်္ကျီကြယ်သီးတွေ ဖြုတ်ထားပီး ဘရာစီယာကို ပင့်တင်လို့ လုံးဝန်းနေတဲ့ နို့အုံကို အုပ်ကိုင်ပီး နို့သီးရဲရဲလေးကို ပြွတ်ကနဲ ငုံစို့ပီး လျှာနဲ့ဝိုက်ကလိလိုက်ရာ “အမလေး ဖိုးထောင် မလုပ်ပါနဲ့ ။ ငါ ငါတို့ အခုလို မဖြစ်သင့်ဘူးလေ” လို့ ပြောနေပေမဲ့ ဖိုးထောင်ရဲ့ နို့သီးကို လျှာဝိုက်စို့လိုက်တိုင်း မိနွေရင်ပတ်က
ကော့ကော့ ပေးနေမိတယ် ။ ဖိုးထောင်လက်တဖက်က မိနွေရဲ့လုံချည်စကို ဆွဲချွတ်ပီး စေ့ထားတဲ့ ပေါင်ကြားကို နို့စို့ရင်း ပွတ်ပေးလိုက်ရာ ခပ်ဟဟဖြစ်သွားတဲ့ မိနွေပေါင်ကြားအတွင်း ဖိုးထောင်လက်က အမွေးမကြမ်းသေးတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို အုပ်ကိုင်ပီး ပြူထွက်လာတဲ့ စောက်စိကို ဖိပွတ်ပေးလိုက်ရာ “အင့်”ကနဲ ညည်းတွားပီး ပေါင်နှစ်ဖက်က ကားထွက်သွားပီး ဖင်ကြီးက အလိုလိုကော့ပေးနေပီလေ။ စောက်စိကို လက်မနဲ့ပွတ်ကလိရင်း အရည်စိမ့်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်နခမ်းသားတွေကို အထက်အောက်ပွတ်ကလိပေးလိုက်ရာ မိနွေလက်တွေက နို့စို့နေတဲ့ ဖိုးထောင်ခေါင်းက ဆံပင်တွေ ဆုပ်ကိုင်နေရင်း တအိအိ အသံနဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုက်ရင်း ခေါင်းကို ခါရမ်းနေအောင် ခံစားနေပီ။
အထှာနပ်နေတဲ့ဖိုးထောင်လည်း နို့စို့နေရင်းက မိနွေဗိုက်သားပြင်ကို စုပ်နမ်းရင်း ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ထောင်မပြီး မိနွေစောက်ဖုတ်ကို လျှာနဲ့ အောက်ကနေ ပင့်ယက်ပီး စောက်စိကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ညှပ်ရင်း အစိကို လျှာနဲ့ဝိုက်ကလိပီး ပြွတ်ကနဲ စုပ်လိုက်ရာ”အမလေး ဖိုးထောင် ရှီးး” ခေါင်းလေးမော့တက်သွားအောင် ညည်းတွားရင်း ခြေဖျားတွေ ကုပ်ကွေးရင်း ဖင်ကြီးကြွတက်လာကာ မိနွေလက်က ဖိုးထောင်ဆံပင်ကို တအားဆွဲယူလိုက်ရာ “ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ ဖိုးထောင် အ အိ” ဖိုးထောင်လည်း ကွပ်ပျစ်အောက်မှ နွေမပေါင်နှစ်ဖက်ကို ထမ်းထားရင်း စောက်ဖုတ်နခမ်းသားရဲရဲကို အသာဖြဲပြီး လျှာဖြင့် ဖုတ်အဝကနေ စောက်စိအထိ ပင့်ယက်လိုက်ရင်း ပြူးထွက်နေတဲ့စောက်စိကို နှုတ်ခမ်းနှင့်ဖိညှပ်ကာ စောက်စိကို လျှာနှင့် ဝိုက်ကလိပေးလိုက်ရာ “အမလေး ဖိုးးထောင် ရှီးး”ဆိုပီး ညည်းတွားရင်း တကြိမ်တခါမှ မခံစားဖူးတဲ့ကာမ အရသာကြောင့် ခြေဖျားတွေကွေးပီး ပေါင်တွေက အလိုက်သင့်ပိုကားပေးလာပီး ဖင်ကြီးကော့တက်အောင် စောက်ဖုတ်အယက်ခံနေရင်း မိနွေလက်တွေက ဖိုးထောင်ဆံပင်တွေ ဆုတ်ကိုင်ကာ ဖိုးထောင်ပင့်ယက်လိုက်တိုင်း စောက်ဖုတ်ကြီးကို
ကော့ကော့ပေးနေမိပီလေ။ မိနွေခေါင်းလေး ဘယ်ညာခါရမ်းရင်း စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေကို ယားယံလာပီး တခုခုကို တောင့်တစိတ်က “ဖိုးထောင်ရယ် ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲ။ အမလေးး ရှီး ဟင်းး” မိနွေအဆင်သင့်ဖြစ်နေပီဆိုတာ အရည်တွေရွဲနေတဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးနဲ့ မိနွေရဲ့လိုလားတောင့်တ ညည်းညူမှုတွေ အတွေ့အကြုံရှိနေတဲ့ ဖိုးထောင်သိလိုက်တော့ မိနွေပေါင်တွေ ထမ်းဖိထားရင်း လီးကြီးကို အရည်တွေရွဲနေတဲ့စောက်အကွဲကြောင်းပေါ် ဖိကပ်ကာ မိနွေရဲ့နို့တွေကို ဖိုးထောင်ရင်ဘတ်နဲ့ ကပ်ထားရင်း မိနွေပခုံးနှစ်ဖက်ကို အောက်မှလျိုဖက်ပီး လီးထိပ်ဖြင့် စောက်စိကို ပင့်ထိုးကလိပေးလိုက်ရာ
“အဟင့် အ ” ညည်းတွားရင်း လီးထိပ်ကို စောက်ဖုတ်အဝနဲ့ တည့်သွားအောင် အောက်ကနေ ဖင်ကြီးကို ကော့ပေးမိနေတယ် ။
ညည်းတွားနေတဲ့ မိနွေနှုတ်ခမ်းလေးကို ဖိုးထောင် kissစုပ်လိုက်ရင်း စောက်ရည်တွေကပ်လာတဲ့ လီးကြီးကို စောက်ဖုတ်နခမ်းသားပေါ် ပွတ်ဆွဲပင့်ထိုး ကလိပေးနေရင်းမှ လီးထိပ်က စောက်ဖုတ်အဝနဲ့ တည့်သွားချိန်မှာ ခါးအားနည်းနည်းသုံးကာ ဖိသွင်းလိုက်ရာ “ဗြစ်” “အမေ့” ညှင်းသွဲ့သွဲ့ အော်လိုက်ရင်း မိနွေလက်တွေက ဖိုးထောင်ကို တွန်းရင်း “နာတယ် ဖိုးထောင် အု အု” စကားမပြောခွင့်မရအောင် နှုတ်ခမ်းတွေကို ဖိုးထောင်kissဆွဲပီး မိနွေနို့တွေကို ရင်ဘတ်နဲ့ဖိပွတ်အောင် ဖက်ထားရင်း စောက်ဖုတ်ထဲဝင်သွားတဲ့ လီးထစ်ကို နည်းနည်းဖိသွင်းလိုက် ခဏလေးငြိမ်ပီး စိမ်ထားကာ kissဆွဲလိုက် လည်ပင်းတွေ ယက်စုပ်လိုက် လီးကြီးကို နည်းနည်းဖိသွင်းလိုက် လိုးပေးနေစဉ် လီးတဝက်ခန့်အရောက်မှာ မိနွေရဲ့အပျိုစင်တံခါးက တားဆီးနေတာ ဖိုးထောင်ထိမိခံစားပီး တင်းကြပ်စီးပိုင်နေတဲ့ မိနွေးစောက်ဖုတ်အတွင်း လီးကြီးကို ခဏစိမ်ပီး နို့တွေစို့ပေးလိုက်ရာ မိနွေတယောက် ကာမအရသာကို နာကျဉ်မှုရောယှက်ပေမဲ့လည်း ရင်ဖိုလှိုက်မောစွာ ခံစားနေမိပီလေ။ ခဏစိမ်ထားတဲ့လီးကြီးကို စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေက ညှစ်ဆုပ်လာချိန်မှာ လီးကို နည်းနည်းလေးထုတ် ညင်ညင်သာသာလေး ဖိသွင်းပီး လေး ငါးကြိမ်လောက် လိုးပီးချိန်မှာ မိနွေကိုတအားဖက်ထားရင်း kissဆွဲပြီး လီးထစ်ကို စောက်ဖုတ်အဝနားထိ ပြန်ထုတ်ပီး ခါးအားသုံးကာ တချက်ထဲ ခပ်ဆပ်ဆပ် ဖိလိုးလိုက်ရာ “ဖေါက်” “အု အင့်” မိနွေရဲ့ရုန်းကန်မှုနဲ့အတူ ဖိုးထောင်လီးကြီးလည်း မိနွေစောက်ဖုတ်အတွင်း တဆုံးဝင်သွားပီး မိနွေလက်သည်းတို့က ဖိုးထောင်ကျောပြင် အသားထဲထိ နစ်ဝင်သွားတယ်လေ။ “နာလိုက်တာ ဖိုးထောင်ရယ်”ပြောရင်း မျက်ဝန်းအိမ်မှ ဘာကြောင့်ရယ်မသိ မျက်ရည်စတို့ စီးကျလာပေမဲ့ ဖိုးထောင်ကတော့ စောက်ဖုတ်ထဲ လီးကြီးစိမ်ထားရင်း နို့သီးတွေ ပွတ်ကလိုက် နို့အုံကို ကိုင်ထားရင်း လည်ပင်းနဲ့နားရွက်ကို စုပ်နမ်းကာ ကာမခလုပ်တွေကို အဆင့်ဆင့်ဖွင့်ပေးနေပြန်ရာ စောက်ဖုတ်အတွင်းက ငြိမ်နေတဲ့ ဖိုးထောင်လီးကို ညှစ်ဆုပ်ရင်း မိနွေဖင်ကြီးက ကော့ကော့လာပီး တဟင်းဟင်း တအိအိ ညည်းသံပေးလာရာ ဖိုးထောင်လည်း လီးကြီးကို တဖြည်းဖြည်းချင်း အသွင်းအထုတ် လိုးပေးနေလိုက်ရာ လီးဝင်သွားတိုင်း စောက်ဖုတ်နခမ်းသားတို့ ချိုင့်ဝင်ပါသွားပီး လီးကြီးပြန်အထုတ်မှာ စောက်ဖုတ်နခမ်းသားတို့ လီးကြီးနဲ့ကပ်ပါလာပြီး လိုးဆောင့်တိုင်း တစိစိ တစွပ်စွပ်နဲ့ အသံတွေမြည်လာကာ မိနွေလည်း လိုးသွင်းတဲ့အချိန်မှာ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေကို လီးကြီးထိုးခွဲတဲ့အရသာနဲ့ လီးကြီးပြန်ထုတ်သွားတိုင်း ဟာတာတာဖြစ်သွားပီး ကျွတ်ထွက်မှာ စိုးရိမ်သည့်အလား ဖင်ကြီးကို အလိုလိုကော့ပေးနေမိတယ်။
စောက်ရည်များရွဲနစ်၍ လီးအဝင်အထွက် ကောင်းလာတော့ ဖိုးထောင်လည်း ဖြည်းဖြည်းမှ နည်းနည်းသွက်လာပီး လိုးဆောင့်ရင်း “ကောင်းလိုက်တာ မိနွေရယ် ။ ငါ တအားလိုးကောင်းလိုက်တာ ရှူး” စကားလုံးကြမ်းတွေနဲ့အတူ ဖိုးထောင်လိုးဆောင့်ချက်တွေက “အိုး” “ဖတ်” “ဗြစ်” “စိ” အသံတွေနဲ့ ရောယှက်ကြားယောင်နေတဲ့ မိနွေကာမစိတ်တွေလည်း တအားကြွတက်လာပီး “အိ အ အမလေး” ညည်းသံတွေပေးရင်း ဖင်ကြီးကော့ကော့ပီး အလိုးခံနေလိုက်ရာ
“အမလေး တမျိုးကြီးပဲ ဖိုးထောင်ရယ်” “အား ရှူး မိနွေ တအားကောင်း မိနွေ သေးပေါက်ချင်သလိုဖြစ်ရာရင် ပေါက်လိုက်နော်။ အားးး” ဖိုးထောင်ရဲ့လိုးဆောင့်ချက်တွေလည်း ပိုသွက်လာရာ “အိ! အမလေးး အားး ရှီးးး” မိနွေခေါင်းလေး တခါခါနဲ့ ခြေဖျားတွေကွေးပီး ဖိုးထောင်ကျောပြင်ကို တအားဖက်တွယ်ရင်း ဖင်ကြီး တဆတ်ဆတ်ကော့ကာ “ဟင်း ဟူး ” ညည်းတွားရင်း ငြိမ်ကျသွားရာ မိနွေ ပီးသွားပြီဆိုတာ သိလိုက်တဲ့ ဖိုးထောင်လည်း တအားလိုးဆောင့်ရင်း မိနွေရဲ့စောက်ဖုတ်ထဲကို လရည်များ ဗြစ်ကနဲ ဗြစ်ကနဲ ပန်းထုတ်ရင်း “အားး ဟူးး ဖလူးး”သက်မောချသံနဲ့အတူ မိနွေကို တင်းနေအောင် ဖက်ထားရင်း ကာမခရီးတို့ လမ်းဆုံးခဲ့ပီလေ။
သုတ်ရည်နွေးနွေးတို့ ပက်ဖျန်းမှုက မိနွေစောက်ဖုတ်အတွင်း အရသာတထူး ပေးစွမ်းသလိုဖြစ်သွားပီး၊ ဖိုးထောင်လီးကြီးကို စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတို့က ညှစ်ယူပေးနေမိပြန်တယ်။ “ငါ့စိတ်တွေ လွတ်သွားတယ် မိနွေ။ အခုလိုမှားယွင်းအတွက် နင်ပေးမဲ့အပြစ်လည်း ငါ ကျေနပ်စွာ ခံယူမှာပါ “ “ငါက နင့်အကို့ပေါ်သစ္စာမဲ့မိပီလေ။ အခုလိုဖြစ်ကြတာလဲ ငါကိုယ်တိုင် လက်ခံမိလို့လေ။ လက်ခံမိတယ်ဆိုတာလည်းး” မျက်ရည်စလေးနဲ့ စကားရှေ့မဆက်တဲ့ မိနွေကို ဖိုးထောင်က စူးစိုက်ကြည့်နေရင်း “ဘာဖြစ်လို့လဲ ပြောလေ မိနွေ” မိနွေလည်း သက်ပြင်းချရင်း ငြိမ်သက်နေပီး “အေးမူခဏခဏပြောတော့ နင့်ရဲ့အပြုအစုအယုအယ အထိအတွေ့ကို ငါ့မသိစိတ်က လိုချင်မိနေတာ ငါ့ကိုယ်ငါတောင် မသိခဲ့ပေမဲ့ တကယ့်လက်တွေ့မှာ ခွင့်ပြုသလိုဖြစ်သွားတာလေ။ ဒီတခါပဲ မှားပါရစေတော့ ဖိုးထောင်။ အခုလိုဖြစ်သွားခဲ့တာလည်း ဘယ်သူမှ မသိပါစေနဲ့။ မေ့လည်း မေ့ထားပေးပါ ဖိုးထောင်။” “သြော် မိနွေရယ် ။ ငါ ဘယ်သူ့မှမပြောပါဘူးဟာ။ ဒါပေမဲ့ အကိုကြီး ကိုဇော်အပေါ် မတရားသလိုဖြစ်သွားခဲ့ပီ။ “ “ကိုဇော့်အတွက် နင်စိတ်မပူပါနဲ့။ ငါ့ကိစ္စ ငါ့ဘာသာ ဖြေရှင်းမှာပါ။ မိုးလည်းစဲပီ။ အေးမူလာကြိုတော့မှာမသိဘူး သွားကြရအောင်” လယ်စောင့်တဲ့အပြင်မှာ အစောက သည်းထန်စွာရွာပေမဲ့ အခုတော့ ဖြိုးဖြိုးဖျောက်ဖျောက် မိုးပေါက်ကျသံလေးနဲ့ ဖွဲဖွဲမျှရွာကျလို့ တိတ်ဆိတ်နေပေမဲ့ နှစ်ဦးသားရင်ထဲမှာတော့ မေ့မရနိုင်သောဖြစ်ပျက်မှုအတူ အတွေးကိုယ်စီလွင့်မျောရင်း အေးမူရဲ့လှည်းကိုသာ စောင့်ကြိုနေမိပြီ။
မိနွေလည်း ဖိုးထောင်နဲ့မှားယွင်းမိပြီး တစ်ပတ်ခန့် ယာတောကို အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ မသွားတော့သဖြင့် ဖိုးထောင်မှာ စိုးရိမ်ပူပန်မိပီး မိနွေနဲ့ကာမ ဆက်ဆံခဲ့တာကို အတွေးထဲဝင်လာတိုင်း မဖြစ်သင့်တာသိရက်နဲ့ တခါတလေပြန်တမ်းတမိရာ အေးမူနဲ့သာ အချစ်စစ်ပွဲတွေ အခါခါနွဲလို့ လက်မထပ်ခင် ကိုယ်ဝန်မရှိရအောင် မြို့ပေါ်ရောက်ချိန်မှာ သန္ဓေတားဆေးကို ဝယ်ယူရာ မိနွေကို သတိရပီး ဆေးတကဒ်ပိုဝယ်ခဲ့ပြီး မိနွေကို ဆေးစားဖို့အတွက် ကြံဆောင်ရအုံးမည်။ မြို့ပေါ်မှာ ပွဲစားအလုပ်တဖက်ဖြင့် အကိုကြီးကိုဇော့်ကို တွေ့ရတော့ ဖိုးထောင် မျက်နှာမထားတတ် ဖြစ်နေပေမဲ့ အကိုကြီးကတော့ ဘာမှမသိသလို ပုံမှန်အနေအထားနဲ့ ဖိုးထောင်အား “ညီလေး မြို့ပေါ်လာတာနဲ့ အတော်ပဲ။ ငါ့ညီလည်း အတော်စွံနေတယ်ကြားတယ်နော။ အေးမူနဲ့ဘယ်တော့
ယူကြမှာလဲ” “နောင်နှစ်လောက်မှ အကိုကြီးရာ။ ပိုက်ဆံလေးစုလိုက်အုံးမယ်။ ငယ်လည်းငယ်သေးတယ်လေ ဟီးး ဟီးး” “ဘာငယ်တာလဲ ဟင်း ညီအကိုချင်း မသိခက်မယ် ငါ့ညီ ။ သြော် ဒါနဲ့ မိနွေအတွက် စာယူသွားပေးအုံး။ အရေးကြီးတယ်နော်။ ရွာရောက်တာနဲ့ မိနွေကို ဆက်ဆက်ပေးလိုက်နော်။ သူ့ဆီက စကားကြောင်းပြန်မှာလဲ အကိုကြီးဆီ မြို့ပေါ်လာမဲ့စိတ်ချရသူကို ချက်ချင်းပါးပေးအုံးနော် ညီ” “ဟုတ် ဟုတ် အကိုကြီး ။ ကျနော်ပြန်ပီနော် နောက်ကျနေရင် ကားမမှီမှာစိုးလို့” ဖိုးထောင်လည်း ကိုဇော်ပေးလိုက်တဲ့စာအိတ်ကို သေချာထည့်သိမ်းပီး ရွာသို့ပြန်ခဲ့တယ်။
ညနေမှောင်ရီပျိုးစအချိန်မှာတော့ ဖိုးထောင်တယောက် မိနွေတို့အိမ်သို့ ရောက်လာပီး “အဒေါ်. ဂျီးဒေါ်ထွေး မိနွေရှိလား” “ရှိပါ့တော် ဖိုးထောင်။ လက်ထဲကဂျိုင့်က ဘာတုန်းဟဲ့ “ “အဒေါ်စားဖို့ ကြက်ကာလသားချက် ယူလာတာ ။ အခုည ကိုသာကျော်တို့အိမ်မှာစုပြီး ပျော်ပွဲစားလုပ်မလို့လေ အဒေါ် ။ အဲဒါကြောင့် မိနွေလာမလား လာမေးတာ” “မိနွေသာ သွားမေးချေ။ ဟဲ့ မိနွေ ဒီမှာ ဖိုးထောင်ရောက်နေတယ်” ဖိုးထောင်လည်း ဂျီးဒေါ်ထွေးအား ဟင်းဂျိုင့်ပေးပီး မိနွေဆီသွားပီး “မိနွေ ဒီညတလင်းသိမ်းပွဲ ပျော်ပွဲစားလုပ်မလို့ အေးမူလည်း လာမယ်ပြောတယ် နင်လာမှာလား” “အင်း ခဏလောက်ပဲ လာဖြစ်မယ်မလား မသိ။ နင်တို့က အသောက်အစားတွေ ပါသေးတယ်မလား။” “ထန်းရည်လောက်ပဲ ပါတယ်ပါဟ ။ နည်းနည်းလေးပါ ။ တခါတလေမို့ အပျော်သက်သက်ပါ မိနွေရယ်။ နင်တို့မိန်းကလေးတွေက မုန့်လုပ်စားပီး စကားထှာဖွက်ကြလေ။ ရော့ အကိုကြီးပေးလိုက်တဲ့စာ” ဂျီးဒေါ်ထွေး မကြားအောင် အသံတိုးတိုးဖြင့်ပြောပြီး စာအိတ်ကို လက်ကျိတ်တိုးပေး၍ “ညပိုင်းကျ နင်လာမယ်ဆိုရင် အေးမူတို့အိမ်ဖက်က လာခဲ့နော်” “အဒေါ် ကျနော်ပြန်လိုက်အုံးမယ်” “အေးဟဲ့ ဖိုးထောင် ညကျရင် ပျော်ပွဲစားလုပ်တာတော့လုပ်ပါ စကားများရန်မဖြစ်ကြနဲ့အုံးနော်” “ဟုတ် ဟုတ် အဒေါ် စိတ်ချပါ ။ အပျော်သက်သက်ပါ အဒေါ်” ဒီလိုနဲ့ညဦးပိုင်း လသာသာမှာ ပျော်ပွဲစား သောက်စား ကစားကြအပြီး အေးမူလိုက်ပို့ပီး “ဖိုးထောင် ရော့ ဒီစာကို ကိုဇော့်ပေးလိုက်ပါနော်” “အင်း ပေး ။ နင့်ကိုလည်း ငါ ပေးစရာတခုရှိတယ်ဟ။
အိမ်ခဏလိုက်ခဲ့ပါအုံး မိနွေ။” “ဘာပေးမှာမလို့လဲ ငါ မလိုက်ချင်ဘူး ဖိုးထောင်။ အိမ်ပြန်တော့မယ်” “မလိုက်လို့မဖြစ်ဘူး မိနွေ။ ဟိုနေ့ကကိစ္စအတွက် နင့်သောက်ဖို့ ဆေးဝယ်လာတာ အိမ်မှာကျန်ခဲ့လို့”ထန်းရည်နံ့နဲ့ တိုးတိုးလေးပြောလိုက်တဲ့ ဖိုးထောင်စကားက မိနွေရဲ့ရင်မှာ လှိုက်ဖိုရပြန်ပီ။ “ခဏလေးလိုက်ခဲ့နော် မိနွေ”အသနားခံပြောရင်း မိနွေလက်ကိုဆွဲကာ ဖိုးထောင်အိမ်သို့ တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားပြီး အဖီတဲအတွင်းအရောက် မိနွေကို ဖိုးထောင်က အမှတ်မထင် ဆွဲဖက်ကာ “ငါ မေ့မရဘူး မိနွေရယ် ရှူး ရှူး ပြွတ်” “အို့ အွင့် အု အု” ဖိုးထောင်ရဲ့ ထန်းရည်အရှိန်နဲ့ လက်ရဲဇက်ရဲ နမ်းရှုံ့kissဆွဲခြင်းကို အငိုက်ခံရတဲ့ မိနွေလည်း ကာမအတွေ့ထူးကို သိရှိထားတော့ ငြင်းဆန်ပီး ရုန်းကန်ပေမဲ့လည်း အားအင်မပါလှ။ “အို လွှတ်ပါ ဖိုးထောင်ရယ်။ ငါတို့က မဖြစ်သင့်ဘူးလေ ဟင့် အွန့်” ဖိုးထောင်လည်း “မဖြစ်သင့်တာ ငါလည်း သိပေမဲ့ နင့်ကို မေ့မရဘူးဟာ။ ပြွတ် ပြွတ်” မိနွေကို kissဆွဲကာ နို့တွေကို ပွတ်ကိုင်ရင်း ကွတ်ပျစ်ပေါ်ကို ဖက်လှဲလိုက်လိုက်ပီး မိနွေကိုခွလျှက် စောက်ဖုတ်ကို လုံချည်အပေါ်က အုပ်ကိုင်ပီး ပွတ်ပေးလိုက်ရာ “အို့ အမေ့ ဖိုးထောင်” မိနွေရဲ့ညှင်းသဲ့သဲ့ ညည်းတွားသံလေးက ဖိုးထောင်အတွက် မီးစိမ်းပြနေပီဆိုတာ သိလိုက်တော့ လုံချည်ကို ချွတ်ပီး စောက်ဖုတ်ကို ခဏမျှယက်ပေးလိုက်ရာ အရည်တွေရွဲပီး
တအိအိလေး တိုးတိုးလေးညည်းရှာနေတဲ့ မိနွေပေါင်တွေထမ်းပီး စောက်ဖုတ်အဝကို လီးတေ့ပြီး လိုးသွင်းလိုက်ရာ “အားး ရှီးး” စီးကြပ်လှတဲ့စောက်ဖုတ်ထဲကို ဖိုးထောင်လီးကြီးက အတွင်းသားတွေ ထိုးခွဲပွတ်ဆွဲသွားတဲ့ အရသာက နှစ်ဦးလုံးအတွက် ကာမမီးတွေ မငြိမ်းသတ်နိုင်အောင် တောက်လောင်ကြပီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖြင့် ခရီးဆုံးထိတိုင် အပေးအယူမျှမျှဖြင့် ဆင်နွဲကြပီလေ။
နှစ်ဦးသား ကာမဆန္ဒပြည့်ဝလို့ ပြီးမြောက်သွားချိန်မှာ တယောက်နဲ့တယောက် ထပ်လျှက်ဖက်ထားရင်း အနားယူချိန်ဝယ် “ဖယ်တော့ ဖိုးထောင် ငါ ပြန်တော့မယ်။ ပေး ဆေးကဒ်” “မဖယ်ချင်တော့ဘူး မိနွေရယ်။ အခုလိုလေး ဖက်ထားခွင့်ရှိချင်တယ်” “မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဖိုးထောင်ရယ်။ နင်လည်းငါ့ကိုချစ်တာ မဟုတ်သလို ငါလည်း နင့်ကိုမချစ်ဘူး ဖိုးထောင်။ ဒို့နှစ်ယောက်လုံးက မထင်မှတ်ပဲ ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့မှာ သာယာနေမိတာလေ။ ရှေ့ဆက်ပီး ဒီလိုမဖြစ်သင့်
မကြုံဆုံသင့်တော့ဘူး။ ရှေ့လာမဲ့လပြည့်ကျော် ဥပုဒ်ညမှာ ကိုဇော့်နဲ့ ခိုးရာလိုက်ဖို့ နင့်ဆီပေးတဲ့စာမှာ အချိန်းအချက်လုပ်ပြီးပီ။ ရှေ့ဆက် အနေအထိုင်ဆင်ခြင်ပီး ဖြစ်ခဲ့တာတွေ မေ့ထားကြရအောင်နော်” မိနွေရဲ့ အသံတုန်တုန်လေးကို ဖိုးထောင်ကြားလိုက်ရတော့ “ဟူးး အင်းပါ မိနွေရယ်။ အခုလိုဖြစ်ရတာလည်း ငါ့အမှားတွေပါ။ ငါ ဆင်ခြင်ပါ့မယ် မိနွေရယ် ။ ရော့ ဆေးကဒ်” မိနွေကို ဆေးကဒ်ပေးပြီး အိမ်အထိလိုက်ပို့ကာ သာလွန်းတဲ့လပြည့်ညရဲ့ လဝန်းကြီးကို ဖိုးထောင် ငေးမောရင်း ညနက်ထိတိုင် အတွေးစိတ်တို့က ဖြစ်ပျက်ခဲ့ အကိုကြီးကိုဇော်သိခဲ့ရင်ဖြင့် တွေးတောရင်း ညနက်ခဲ့ပြီလေ။
တပတ်ခန့်အကြာမှာတော့ မနက်စောမြူနှင်းဝေ ရောင်နီသန်းချိန်မှာ “ဟဲ့ ဖိုးထောင် သား ဖိုးထောင် ထစမ်းအုံးကွဲ့” အမေရဲ့ ငိုသံပါပါ အိပ်ယာလာနှိုးတော့ ဖိုးထောင်လည်း အလန့်တကြား နိုးထရင်း “ဟုတ် အမေ ထပြီ ထပြီ ။ အမေ ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်” စောစောစီးစီး မျက်နှာမကောင်းလှတဲ့ အမေ့ကိုကြည့်ရင်း
ဖိုးထောင် ပြန်မေးလိုက်ရာ “အီ”ကနဲ ငိုချရင်း “ညက ငါ့တူ နင့်အကို ငဇော်နဲ့မိနွေတို့ ကားတင်ခိုးပြေးတာ လမ်းမှာကားမှောက်လို့ နှစ်ယောက်လုံး ပွဲချင်းပီး ဆုံးသွားပီတဲ့ သားရေ။ အခုပဲ မြို့ဂတ်က ရဲအုပ်လေး လာပြီးအကြောင်းကြားလို့တဲ့ အီး ဟီးး” ငိုနေရင်းပြောနေတဲ့ အမေစကားတွေကြောင့် ဖိုးထောင်ရင်ထဲ အံ့သြမှုများစွာဖြင့် နင့်ကနဲ ခံစားလိုက်ရပီး “အဖြစ်ဆိုးလှချည်လား အကိုကြီးနဲ့မိနွေရယ်။ ဒါဆို မြို့ပေါ်ကို သားလိုက်သွားအုံးမယ်နော် အမေ” “အင်း မင့်ဘကြီးတို့ အခုသွားတော့မှာတဲ့ အမေ့ကို လာပြောသွားတယ်။ ငါ့တူကြီး ကံမကောင်းရှာပါဘူးကွယ်” တရှုံ့ရှုံ့ငိုကြွေးနေတဲ့ အမေ့ကို ထားခဲ့ပြီး ဘကြီးအိမ်သို့ အပြေးတပိုင်းခြေလှမ်းတို့ဖြင့် သွားရင် မြို့ပေါ် သို့ ခရီးနှင်ကြခဲ့ကြပြီး ဆေးရုံရင်ခွဲရုံအတွင်းက ကိုဇော်နဲ့မိနွေတို့ရဲ့ ရုပ်ကလာဒ်ကို သေချာမြင်လိုက်ရတော့ ဝမ်းနည်းစွာ မျက်ရည်ကျနေမိပြီး ကိုဇော့်ရုပ်အလောင်းအနားကပ်ပီး လက်ဖဝါးတွေ ဆုပ်ကိုင်ရင်း “ကျနော် မိနွေနဲ့မှားခဲ့တာ အကိုကြီး သိသည်ဖြစ်စေ မသိသည်ဖြစ်စေ ခွင့်လွတ်ပါ။ အကိုကြီး ခွင့်မလွတ်နိုင်ရင်လည်း နောင်ဘ၀ သံသရာမှာ ညီလေးပြန်ဆပ်ပါ့မယ် ကိုကြီး” စိတ်ထဲက တောင်းပန်ရင်း “ကံဆိုးလှချည်လား ကိုကြီးရယ်။ ကောင်းရာသုဂတိ လားလို့ ရောက်ရာဘုံဝမှာ အခုလိုအဖြစ်မျိုး မကြုံတွေ့ပါနဲ့လို့ ညီလေး ဆုတောင်းပေးနေမှာ” ပြောပြီး မျက်ရည်မိုးတွေ ရွာသွန်းရင်း နဖူးပြင်မှာ ဒဏ်ရာသေးသေးလေးနဲ့ အိပ်စက်နေသလိုနေရှာတဲ့ မိနွေနဖူးပြင်လေးကို စမ်းပြီး “အဖြစ်ဆိုးလှချည်လား မိနွေရယ်။
ချစ်သူနဲ့ပေါင်းဖက်ကံ ပါမလာတဲ့ နင့်အတွက် စိတ်မကောင်းဘူး မိနွေရာ ဖြစ်လေရာဘဝတိုင်းမှာ နင်တကယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ သက်ဆုံးတိုင် ပေါင်ဖက်နိုင်ပြီး အခုလိုအဖြစ်မျိုး မကြုံတွေပါစေနဲ့လို့ ငါ ဆုတောင်းပေးနေပါ့မယ် မိနွေရေ” စိတ်ထဲကစကားတွေ တီးတိုးရေရွတ်ရင်း “ကံမကောင်းရှာပါလား မိနွေရယ်”လို့ တိုးတိတ်စွာ ညည်းတွားရင်း အံကျိတ်ထားသည့်ကြားက မျက်ရည်စက်တို့က ကျဆင်းရပြန်ပြီ။ နွေဆိုတဲ့စာကားလုံးလေးကြားမိတိုင်း နွေရောက်လေတိုင်း လျှပ်စီးလက်လို့ မိုးခြိမ်းသံကြားရတဲ့နေ့ရက်တွေ၊ ဆောင်းဝင်လို့ တလင်းသိမ်းတဲ့အချိန်ကာလ၊ လမင်းကြီး ထိန်ထိန်သာတဲ့ လပြည့်ညတွေ၊ မြူနှင်းဝေတဲ့ နံနက်လင်းချိန်တွေ၊ အချိန်ကာလတွေ တိုက်ဆိုင်မှုရှိလေတိုင်း သက်ပြင်းသဲ့သဲ့ချလို့ အဝေးကို ငေးမောတတ်နေတာ ဖိုးထောင်တယောက်ပါ။ ၃-နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလတို့ ရာသီစက်ဝန်း ရွေ့ပြောင်းလို့ လာခဲ့ပြီး မိုးဥိးကျအချိန်လေးမှာ လျှပ်စီးရောင် တဝန်းဝန်း မိုးခြိမ်းသံ တဂျိန်းဂျိန်း မိုးသည်းတဲ့ညနေချိန်လေးမှာ “ဂျိန်း” “အဲ့ ဝူဝဲ ဝူဝဲ” မိုးခြိမ်းသံနဲ့အတူ လသားအရွယ်ကလေးငိုသံက ပြိုင်ဆိုင်နေသည့်အလား ဆူညံနေပြီး “ကိုဖိုးထောင် ကိုဖိုးထောင် ထင်းထွေ ကျမ သိမ်းလိုက်မယ်။ တော့သားလေး လာထိန်းကူပေးအုံး။ အခုလို မိုးခြိမ်းတိုင်း ငိုတတ်တဲ့ ရှင့်သားလေးက ရှင်ထိန်းမှ အငိုတိတ်တတ်တာ သိရက်နဲ့ မြန်မြန်လာ” ဖိုးထောင်လည်း သိမ်းလက်စ ထင်းတွေထားခဲ့ပြီး ငိုကြွေးနေတဲ့ သားငယ်လေးကို ပွေ့ချီချော့မြူရင်း မွေးရာပါ သားငယ်ရဲ့နဖူးပြင်က အမာရွတ်လေးကို ငေးကြည့်ရင်း မိန်းမအေးမူ ပြောသလို သူတို့သားလေဟာ မိနွေလူဝင်စားဖြစ်ခဲ့တာသေချာလို့ စကားပြောတတ် အရွယ်ရောက်လို့ စကားပြောခဲ့ရင် ဖိုးထောင်ရဲ့အတိတ် အရိပ်တစ္ဆေတွေက ခြောက်လှန့်ရင်း ဟူးးး
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဆောငျးမှာကွှသေောနှေ